Fijerena ny olana Othipron manoloana ny adihevitra (tsanganana 457) - Raby Michael Avraham
Fijerena ny olana Othipron amin'ny fahazavan'ny adihevitra (Tsanganana 457)
80 hevitra	/ L. Adar A. 03 - 03/2022/XNUMX 03 / 03 / 2022
Tao amin'ny tsanganana teo aloha dia nasehoko ny adihevitra teo amiko sy i David Enoka (jereo Eto Ny firaketana) momba ny fanontaniana hoe ilaina ve Andriamanitra ho fototry ny fahamendrehan'ny fitondran-tena (na: Raha tsy misy an'Andriamanitra dia azo atao ny zava-drehetra). Nandritra ny fifanakalozan-kevitra, ny mpandrindra (Jeremy Fogel) dia nanangana ny olana momba an'i Othipron, izay toa tsy misy ifandraisany amin'ny fifanakalozan-kevitra. Rehefa afaka kelikely dia nampahatsiahy ny omby iray aho 278 Efa niatrika ny olana sy ny fiantraikan'izany amin'ny porofo avy amin'ny moraly aho (ny fanantonana ny fitondran-tena amin'Andriamanitra). Tamin'ity resaka teo ambony ity dia novaliako fohifohy ny fanontaniana, ary eto aho dia hiverina amin'ity olana ity mba hanazavana ny fifandraisany amin'ny adihevitra amin'i Enoka sy hanamafisana ny fanavahana nataoko teo sy ny tsanganana teo aloha.
Zava-dehibe ho ahy ny sasin-teny amin'ny fanamarihana fa ny foto-kevitra momba an'Andriamanitra izay ifandraisako amin'ity tsanganana ity dia tsy voatery hitovy amin'ilay Andriamanitra "mahitsy" izay noresahiko tamin'ny tsanganana teo aloha. Ny soso-kevitra sasany apetrako eto dia fanampim-panampiana izay tsy ao anatin'ilay Andriamanitra "mahitsy" takiana amin'ny fanatanterahana ny fitsipiky ny fitondran-tena. Hiverina amin'ity teboka ity amin'ny faran'ny tsanganana aho.
Ny Othipron Dilemma
Ao amin'ny fifanakalozan-kevitra Platon A. Eitifron Apetraka izao fanontaniana izao: Tsara ve ny tsara satria irin’ny andriamanitra izany, sa irin’ny andriamanitra ny tsara satria tsara izany. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fanontaniana dia ny hoe misy dikany tanjona ny tsara, na ny fanapahan-kevitr'ireo andriamanitra no mahatonga azy io ho tsara, fa amin'ny lafiny iray ihany dia afaka manapa-kevitra izy ireo fa tsara na ratsy ny fitondran-tena hafa. Ny zava-drehetra dia natokana ho an'ny sitrapony. Ny fanontaniana mitovy amin'izany dia azo apetraka mazava ho azy koa mifandraika amin'i Gd, ary Avi Sagi sy Daniel Statman, ao amin'ny bokiny. Fivavahana sy fitondran-tena, Manaova fifanakalozan-kevitra amin'ny antsipiriany momba ilay olana. Ny fehin-kevitr'izy ireo dia saika ny mpandinika jiosy rehetra no manohana an'io safidy farany io. Tsy hiditra amin'ny nuances sy ny hevitra rehetra mipoitra ao amin'ny boky etsy ambony amin'ny ankapobeny aho (heveriko fa misy ny tsy fahatomombanana ao anatiny), ary ny tenako dia hifantoka amin'ny topimaso fohy momba ny antony fototra ho an'ny andaniny sy ny ankilany.
Amin'ny lafiny iray, amin'ny teolojia dia mihevitra isika fa Andriamanitra dia mahery indrindra ary tsy miankina amin'ny zavatra rehetra. tsy misy afa-tsy Izy. Izy no namorona izao tontolo izao ary nametraka ny lalàna mifehy azy. Ny dikan'izany dia ny hoe afaka namaritra azy ireo tamin'ny fomba hafa azony noeritreretiny izy. Noho izany dia tsy misy dikany ny tsara sy ny ratsy. Etsy an-danin'izany, raha manaiky an'io fomba fijery io ny olona iray, ny fehin-kevitra dia tsy azo atao ny milaza fa tsara Andriamanitra. Ny filazana fa tsara Andriamanitra dia mihevitra fa misy ny tsara voafaritra na inona na inona momba azy, ary ny tohan-kevitra dia ny hoe misy fifandanjana eo amin’ny fitondrantenany sy ny zavatra takiany ary ny mason-tsivana tanjona mitovy amin’ny tsara. Fa raha ny fanapahan-keviny no mamaritra ny foto-kevitry ny tsara, dia tsy inona izany fa famaritana tautologique (na theorem analytique) ny filazana fa tsara Andriamanitra fa tsy argument. Amin'ny ankapobeny dia midika izany hoe: Andriamanitra dia maniry izay tiany. Marina anefa izany ho antsika rehetra.
Maro ny teolojiana (ary na dia ilay kely tia tena aza no miray tsikombakomba amin'izy ireo) mirona hihevitra fa toerana misy olana izany. Tena tsara Andriamanitra ary tsy ho nisy hafa mihitsy. Mazava ho azy fa mihevitra fa ny tsara dia voafaritra mazava tsara ary Andriamanitra amin'ny zony manokana dia iharan'izany famaritana izany. Mazava ho azy fa afaka nanakorontana antsika sy nanajamba ny masontsika izy mba tsy hanavaka ny tsara sy ny ratsy, saingy tsy afaka namaritra ny tsara sy ny ratsy izy. Araka ny nolazaiko, na dia eo aza ny fahasarotana ara-teôlôjia, dia toa ny ankamaroan'ny mpandinika ny eritreritra jiosy no mitazona ny fomba faharoa.
Fahatakarana sy fampianarana
Ny fiheverana voalohany dia azo hatsaraina kely, ary amboarina toy izao manaraka izao: Manana intuition momba ny tsara sy ny ratsy isika. Ny hevitra dia ny hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia mifanaraka amin'ny intuition mitovy. Fa io intuition io no namboleny tao amintsika, ka tena tsy misy hevitra miohatra amin'ny tsara sy ny ratsy. Araka izany dia azo lazaina fa fitakiana (fa tsy famaritana) tokoa io fanambarana io, fa amin'ny fotoana iray ihany koa dia fanambarana izay miresaka momba ny hevitsika fa tsy izao tontolo izao. Raha ny amin’izao tontolo izao mihitsy, dia tsy midika na inona na inona ilay filazana hoe “tsara Andriamanitra” (identity poakaty izany, tautologie).
Ity dia tranga manokana momba ny olana amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny dikany sy ny fampianarana. Maka ohatra iray izay matetika ampiasain'ny filozofa mpanadihady (jereo ohatra. Eto), Ny filazana: Ny kintan'ny maraina no kintan'ny hariva. Izany no noheverina ho kintana roa samy hafa hatry ny ela (ny iray hita amin'ny hariva ary ny iray amin'ny maraina), saingy tamin'ny farany dia nazava taminay fa ilay kintana iray ihany. Fanontaniana isika izao: Filazana na famaritana poakaty (theorem analytique) ve ity fitakiana ity? Misy votoaty ve io sa tautologie poakaty? Toa tsy milaza na inona na inona ny fehezanteny toy izany, satria izy io dia maha-izy azy ny zavatra iray sy ny tenany. Saingy ny fahatsapantsika dia misy zava-baovao amin'ity fehezanteny ity. Mampianatra antsika zavatra momba ny hevitsika manokana izy io. Ny kintana roa noheverinay fa samy hafa dia kintana iray ihany. Manova ny fahalalantsika an'izao tontolo izao ity fehezanteny ity, na dia toa tsy misy dikany aza izany raha jerena ny votoatiny tanjona.
Mariho fa izany no trangan'ny filazana momba ny maha-izy azy amin'ny karazana: a dia b. Raha heverina fa marina io fanambarana io, dia midika izany hoe: a dia a, izany hoe tautologie foana. Ny vahaolana famakafakana amin'ny olan'ny dikan'ny fitakiana maha-izy azy dia ny fanavahana ny dikany sy ny fampianarana. Ny filozofa mpanadihady (manaraka an'i Frege) dia milaza fa araka ny maha-izy azy dia misy dikany fa tsy fampianarana (na loko). Misy dikany izay sady tsy poakaty no tsy misy dikany amintsika, fa raha jerena ny tondroiny eto amin'izao tontolo izao dia fitakiana maha-izy azy.
Afaka miverina amin'ny olana Othipron isika izao. Eo amin’ny famaritan’Andriamanitra ny tsara sy ny ratsy, dia azo lazaina fa misy dikany ny filazana hoe tsara izy fa tsy fampianarana. Raha ny fampianarany (loko) dia foana satria tsara izy raha ny famaritana ny tsara. Ny zavatra rehetra ataony dia mamela azy eo ambanin'ny famaritana ny tsara, ka i Amira izay tsara dia tsy misy afa-po (analytique).
Sarotra amiko anefa ny manaiky na dia io teny malefaka io aza. Ny fahatsapana tsotsotra dia heverina fa tsara tokoa Andriamanitra, izany hoe ny filazana fa tsara dia tsy famaritana poakaty fa fitakiana. Raha tsy izany no zava-misy, dia tsy hisy dikany ny fandraisana anjara amin’ny fahatsaran’Andriamanitra, ary tsy hisy fanontaniana mikasika izany avy amin’ireo fanao izay toa maloto fitondran-tena amintsika (toy ny famatorana an’i Isaka, ny fandringanana an’i Amaleka, tahaka). Tokony ho takatra fa raha voafaritra ho tsara izay tian'Andriamanitra dia tsy misy toerana hisalasalana ara-moraly momba izany. Nandidy ny hanaraka an’i Isaka izy ary noho izany dia zavatra tsara ny famatorana an’i Isaka. Ny fahatsapana toy ny hoe misy tsy fitovian-kevitra eto eo amin’ny didin’Andriamanitra sy ny fitondran-tena dia manondro ny fiaingantsika fa tsara Andriamanitra. Tahaka ny fisian'ny adihevitra momba ny etika dia manondro ny maha-zava-dehibe ny etika (raha tsy izany dia tsy misy na inona na inona hiadiana hevitra) ary ny fisian'ny tsikera etika dia manondro ny tsy fitoviana amin'ny zava-misy ara-moraly (raha tsy izany dia tsy misy toerana ho an'ny fanakianana ny fihetsika tsy etika sy fitondran-tena).
Ny fehin-kevitra dia fa ny intuition ara-pivavahana tsotra dia mampianatra antsika amin'ny lafiny ilany amin'ny olana Othipron fa ny tsara dia voafaritra mazava sy an-tery na dia Andriamanitra aza. Izany hoe tian’Andriamanitra ny zavatra satria tsara izany fa tsy ny mifanohitra amin’izany. Amin'izany fomba izany ihany no azo lazaina fa tsara, ary koa mitsikera azy (na mitady fanazavana) amin'ny trangan-javatra tsy mety. Saingy araka ny efa hitantsika fa io fomba fiasa io dia mampiakatra ny fahasarotana mifanohitra amin'izany, ary hanohy ny famahana izany aho.
Eo anelanelan'ny lalàn'ny fizika sy ny "lalàn'ny" lojika
Io fomba fiasa io dia miteraka fahasahiranana ara-teolojia mifanohitra amin'izany. Ahoana no ahafahan’Andriamanitra, izay namorona ny zava-drehetra sy ny zavatra rehetra natao tamin’ny heriny, dia mbola eo ambanin’ny lalàna ivelany izay tsy nataony? Mba hahatakarana izany dia tsy maintsy miverina amin'ny fanavahana nataoko teto taloha teo amin'ireo karazana lalàna roa isika (jereo ohatra ny tsanganana. 278). Andriamanitra, mazava ho azy, dia tsy manaiky ny lalàn'ny fizika, satria izy no namorona azy, ary ny vava izay mandrara dia ny vava mamela. Tsy iharan'ny lalàn'ny fanjakana ihany koa izy (raha tsy olom-pirenena amin'izany ihany). Fa amin'ny lafiny iray dia azo antoka fa "miankina" amin'ny lalàn'ny lojika. “Terena” amin’Andriamanitra ny lalàn’ny lojika. Tsy afaka manao telozoro boribory izy na miala amin'ny lojika, satria fotsiny hoe tsy misy toy ny telozoro boribory ary tsy misy biby toy izany miala amin'ny lojika. Ny telozoro amin'ny famaritana dia tsy boribory. Izany dia tsy noho ny lalàna napetraka momba ny telozoro noho ny filana, fa noho ny toetrany. Amin'ny famaritana azy amin'ny maha telozoro azy dia tsy boribory izy ary tsy azo boribory. Noho izany ny tsy fahafahana mamorona telozoro boribory dia tsy noho ny faneriterena ivelany apetraka amin'ny Gd, ary noho izany dia tsy voafetra ihany koa ny fahaizany rehetra, na ny tsy fahampiana ao aminy.
Ny zavaboary omnipotent dia afaka manao izay rehetra azo eritreretina na dia ao anatin'ny eritreritra. Fa ny telozoro boribory dia hevitra poakaty. Tsy misy izany ary tsy azo eritreretina. Noho izany, ny tsy fahafahan’Andriamanitra mamorona zavatra toy izany dia tsy latsa-danja amin’ny fahaizany. Alao sary an-tsaina hoe misy manontany anao raha afaka manao telozoro boribory Andriamanitra. Angatahiko izy mba hanazava amiko io hevitra io aloha dia mety ho azoko valiana. Mazava ho azy fa tsy ho hainy ny hanazava izany (manana zoro maranitra ve izy sa tsia? Inona no fitambaran'ny zorony? Mitovy halavirana amin'io teboka io ve ny teboka rehetra eo aminy?), Ka ny fanontaniana dia miharihary.
Araka ny nohazavaiko tao, ny fototry ny fisafotofotoana dia ny teny hoe "lalàna", izay ampiasaina amin'ireo sehatra roa ireo amin'ny heviny hafa. Ny lalàn'ny fizika dia lalàna napetrak'Andriamanitra tamin'ny zavaboary. Ity lalàna ity dia ny fanapahan-keviny hamorona toetra manokana ho an'izao tontolo izao izay noforoniny avy amin'ny fahafahana maro samihafa. Afaka namorona lalàna hafa momba ny natiora koa izy. Mifanohitra amin'izany, ny lalàn'ny lojika dia tsy lalàna mitovy amin'izany. Ny fampiasana ny teny hoe "lalàna" amin'ny teny lojika dia nindramina. Famaritana fotsiny ny zavatra fa tsy zavatra ivelany no terena. Ny telozoro dia tsy boribory na satria misy mandrara izany na satria voarara. Noho ny maha telozoro azy dia tsy boribory tsotra izao. Noho izany dia tsy mety ny milaza eto fa Andriamanitra dia nifidy rafitra lojika iray tamin'ireo rafitra maro azo atao. Tsy misy rafitra lojika hafa. Avy eo amin'ny teny manodidina mitovy amin'ny an'ny lalàn'ny lojika dia hampiasa ny teny hoe "lalàna" aho amin'ny marika teny.
Ny satan'ny lalàn'ny fitondran-tena
Ny fanontaniana mipetraka amin’izao fotoana izao dia ny sata mifehy ny lalàm-pitondrantena: Moa ve ireo lalàna ireo amin’ny hevitry ny lalàn’ny fizika, sa “lalàna” amin’ny hevitry ny “lalàna” momba ny lojika? Ireo izay manohana ny lafiny voalohany amin'ny olana Othipron dia mino fa ny lalàn'ny fitondran-tena dia mitovy amin'ny lalàn'ny fizika, ary noho izany dia Andriamanitra no mamaritra sy mamaritra azy ireo. Ny ankilany amin’ilay olana anefa dia mihevitra fa mitovy amin’ny “lalàn’ny lojika” ny “lalàna” momba ny fitondran-tena ( “lalàna” ireny fa tsy lalàna), ka voatery amin’Andriamanitra. Tsy afaka namorona rafi-pitondran-tena hafa izy. Ohatra, tsy afaka mamorona tontolo iray izay hanjakan'ny fitondran-tena hafa izy (fa ny famonoana olona na ny fampijaliana olona dia hisy hetsika tsara). Ny fitondran-tena araka ny famaritana dia mandrara ny famonoana olona.
Mazava ho azy fa afaka mamorona tontolo izay hankafizan'ny olona ny fampijaliana izy (mety amin'ny tontolo toy izany ve ny hiantso azy ireo hoe "fampijaliana"?), Ary avy eo dia mety tsy hisy olana ara-moraly amin'ny fampijaliana. Fa ny toerana mahatonga ny fijaliana dia tsy mampalahelo. Ny fanaovana hosodoko olona dia zavatra ratsy amin'ny tontolo azo atao. Mikasika ny tontolo hafa tena izy io, izany hoe tontolo iray izay tsy miteraka alahelo ny fijaliana. Mety hieritreritra koa ny tontolo iray izay faritana ho tsara ny fanesoana olona, ​​saingy tsy tontolo iray hafa fitondran-tena izany fa tontolo iray izay jamban'ny olona ny fitsipiky ny fitondran-tena (ary koa ilay Andriamanitra namorona azy dia tsy moraly. ). Azonao atao ny manova ny mari-pamantarana rehetra amin'ny toetran'izao tontolo izao ary mamorona tontolo hafa izay hampiavaka azy. Saingy raha jerena ny toetran'io tontolo manokana io, ny fitsipiky ny fitondran-tena dia azo avy amin'izy ireo tsy misy fisalasalana (fanerena antsika izy ireo). Raha ny fahitako azy dia io no fototry ny fanambaran’ny Ramchal fanta-daza hoe “ny toetra tsara manao ny tsara”. Andriamanitra dia tokony hanao ny tsara. Tsy manana safidy hafa izy (fanerena azy).
Midika izany fa ny filazana hoe "ratsy ny famonoana olona" dia mamakafaka, toy ny lalàn'ny fifanoherana. Na dia zava-misy ara-moraly aza izany, dia tsy voatery (fa ilaina). Noho izany dia tsy misy sakana amin’ny filazana fa terena (na ny marimarina kokoa: “forces”) amin’Andriamanitra izany, tahaka ny lojika “forces” aminy. Tsy mitovy amin'ny lalàn'ny natiora izany ohatra. Raiso ho ohatra ny filazana ny lalàn'ny sinton'ny tany: izay zavatra roa misy faobe dia mifanatona amin'ny hery mifanandrify amin'ny vokatry ny faobe ary mifanohitra amin'ny efamira misy elanelana misy eo aminy. Tsy fitakiana famakafakana izany ary mety ho diso. Mety ho nisy tontolo iray izay tsy nitovy ny lalàn'ny sinton'ny tany (ohatra ny hery mifanandrify amin'ny halaviran'ny fahatelo). Ny lalàna toy izany àry dia natokana ho an’Andriamanitra, ary ny fanapahan-keviny ihany no mamaritra ny votoatiny.
Ahoana no mifanaraka amin'ny tsanganana teo aloha
Tao amin'ny tsanganana teo aloha dia nilaza aho fa tsy misy fitondran-tena manan-kery raha tsy misy an'Andriamanitra. Moa ve izany tsy mifanohitra amin'ny filazako eto fa ny fitondran-tena dia terena amin'Andriamanitra sy eo anatrehany, ary noho izany dia tsy vokatry ny sitrapony ihany koa? Toa misy fifanoherana eo anoloana eto. Izao dia azoko fa io angamba no tian'i Jeremy Fogel, ilay mpanentana, izay nanangana ny olana Othipron tamin'ny fifanakalozan-kevitray ary nanontany ahy ny hevitro momba izany.
Tao anatin’ilay fifanakalozan-kevitra mihitsy no nanazavako fohifohy fa manavaka ny famaritana ny tsara sy ny ratsy sy ny fanoloran-tenantsika amin’izy ireo aho. Ny famaritana ny tsara sy ny ratsy dia terena amin'Andriamanitra ary tsy azo atao raha tsy izany. Na izy aza tsy afaka mamaritra hoe tsara ny famonoana olona, ​​na ratsy ny manampy ny hafa. Tsy misy anefa ny fanoloran-tena hanao ny tsara sy hiala amin’ny ratsy raha tsy misy an’Andriamanitra. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny filazana ara-dalàna fa voarara ny famonoana olona, ​​izay midika fa misy ny maha-ara-dalàna ny etika amin'ny fandrarana ny famonoana olona, ​​dia tsy voatery amin'Andriamanitra. Avy amin’ny didiny izany ary avy aminy no nanaovany izany.
Raha hiverenana amin'ny foto-kevitra momba ny 'zava-misy etika' isika dia afaka mametraka izany amin'ny fomba toy izao: mety misy irery izy ireo, araka ny filazan'i David Enoka (izany hoe tsy Andriamanitra no namorona azy), fa araka ny nanoherako azy, na dia misy aza izy ireo ary napetraka amin'ny sasany. zoron'ny tontolon'ny hevitra (dia), Mety mbola tsy mamatotra ahy (tokony). Holazaiko fa ao amin'ny tsanganana teo aloha dia nanavaka ny fanontaniana hoe iza no namorona ny zava-misy ara-moraly (izay nanaovan'i Enoka) sy ny fanontaniana hoe iza no manome azy ireo ny maha-izy azy (izay noheveriko). Ny nolazaiko teto dia na dia tsy namorona ny zava-misy ara-moraly aza Andriamanitra (fanerena eo Aminy izany), ny didiny ihany no afaka manome hery mamatotra azy ireo.
Mety hisy hanontany ankehitriny hoe inona no adidy amin’ny tenan’Andriamanitra amin’ny fitondran-tena? Raha tsara izy dia tokony hanolo-tena amin'ny fitondran-tena (amin'ny filaharany sokajy). Voafatotry ny didiny va izy? Tena hafahafa izany, ary raha ny marina dia mifanohitra ihany koa ny filazako tamin'ny tsanganana teo aloha fa ilaina ny singa ivelany izay hanome an'i de Dicto ny lalàna.
Heveriko fa mety ny milaza fa Andriamanitra dia tsy manolo-tena amin'ny fitondran-tena, fa misafidy izany. Tsy mifidy izay atao hoe moraly izy (fa statistika tanteraka sy henjana izay tsy eo an-tanany) fa misafidy ny hampifaly sy hitaky ny fitondran-tena ara-moraly ny zavaboariny. Toy izany koa ny filazako tamin'ny tsanganana teo aloha momba an'i Ari Alon, fa ny olona iray dia afaka manao lalàna ho an'ny tenany na ho ara-moraly na tsia, fa tsy afaka manao lalàna momba ny fitondran-tena ny tenany (famaritana ny tsara sy ny ratsy). Raha izany no izy, dia samy voafatotry ny lalàn’ny fitondran-tena ny olona na Andriamanitra. Terena amin’izy ireo ny famaritana ny tsara sy ny ratsy fa tsy omena azy ireo. Saingy Andriamanitra dia afaka mandidy ny fitondran-tena ary noho izany dia manome ireo famaritana ireo hery mamatotra antsika, ary tsy afaka manao izany koa ny olombelona.
Hanampy ambaratonga hafa amin'ny sary aho izao. Sarotra ny miresaka momba ny fandrosoana vonjimaika ny zava-misy ara-moraly (famaritana ny tsara sy ny ratsy) amin’Andriamanitra, satria efa nisy foana Izy. Teo anatrehany dia tsy nisy na inona na inona satria tsy misy fotoana eo anoloany. Tsy misy ary tsy mety hisy izao tontolo izao, eny fa na dia izao tontolo izao aza, izay tsy misy an’Andriamanitra. Raha ara-teorika anefa dia mety misy izao tontolo izao izay tsy andidian’Andriamanitra ny fitondran-tena (raha tsy hoe ny toetrany tsara no manery azy hanao ny tsara sy hitaky tombontsoa). Mariho fa efa nianarantsika izao fa ny fitondran-tena dia mialoha ny didin’Andriamanitra, fa tsy Andriamanitra. Momba ny fandrosoana vonjimaika io. Saingy amin'ny lafiny iray dia misy ihany koa ny fandrosoana lehibe.
Tsy miankina amin’ny didin’Andriamanitra ny zava-misy etika, ary tsy asan’Andriamanitra. Saingy mbola tsy misy dikany ny filazana fa misy ny fitondran-tena na dia tsy misy an'Andriamanitra aza. Raha heverina fa Andriamanitra no tena ilaina ny fisiany (ary Andriamanitra relijiozy no resahiko eto, fa tsy ilay "ratsy" tamin'ny tsanganana teo aloha), dia tsy azo atao ny miresaka momba ny zava-misy izay misy ny fisiana ilaina. tsy misy izany. Noho izany na dia misy aza ny moraly (na ny zava-misy etika) tsy misy didy dia tsy azo lazaina fa misy izany raha tsy misy an'Andriamanitra. Na dia misy aza izy roa mifanitsy, ny zava-misy etika dia tsy voatery miankina amin'Andriamanitra.
Saingy ankehitriny dia mety ho tonga amin'ny famaritana hafa kely isika: ny zava-misy ara-moraly dia taolan'ny tenan'Andriamanitra (ara-bakiteny hoe "ny toetra tsara ny manao ny tsara" ara-bakiteny), misy izy ireo araka ny maha-izy azy, ary araka ny maha-izy azy sy ny maha-izy azy. tsy maintsy misy foana izy ireo. Ary na izany aza dia sady tsy maharitra no tsy ilaina ny fahamarinany. Tsy manana hery mamatotra izy ireo raha tsy nodidiana hanao izany.
Tsy nahomby ny fanompoana an’Andriamanitra sy i Asera
Tamin'ny fanokafana ny tsanganana dia nanantitrantitra aho fa ny foto-kevitra momba an'Andriamanitra resahina ato amin'ity tsanganana ity dia tsy ilay Andriamanitra "mahitsy" avy amin'ny tsanganana teo aloha (Andriamanitra dia nitaky ny hanome ny lalàna ara-moraly sy ny zava-misy etika). Ho tsapanao izany rehefa averinao jerena indray ireo soso-kevitra isan-karazany tonga eto mikasika ny hoe misy ilàna azy foana, ary momba ny hoe ny zava-misy ara-moraly angamba dia anisan'ny heriny ary ara-dalàna ny manao ny tsara. sy ny maro hafa. Ireo rehetra ireo dia fanampim-panazavana izay "mahatonga" "matavy" kely ny zavatra "manify" sy minimalista noresahiko tamin'ny tsanganana teo aloha.
Izany dia satria ny fifanakalozan-kevitra ato amin'ity tsanganana ankehitriny ity dia mihatra tanteraka amin'ny sehatry ny teolojia, fa tsy ny meta-etika fotsiny. Raha ny marina, ny dilemma Othipron mihitsy dia an'ny tontolon'ny teolojia. Raha tsy misy ny teolojia dia tsy olana ny filazana fa Andriamanitra no mamaritra ny lalàn'ny fitondran-tena (satria tsy ilaina ny mihevitra fa ny filazana fa tsara izy dia ady hevitra momba azy fa tsy famaritana), dia tsy hisy ny olana. noforonina. Ankoatra izay dia tsy nisy fifanoherana koa tamin'ny fanisana filôzôfika tamin'izay nolazaiko tamin'ny tsanganana teo aloha. Raha Andriamanitra no mamaritra ny tsara sy ny ratsy (ny zava-misy ara-moraly) dia mifanaraka tsara amin'izay nolazaiko tamin'ny tsanganana teo aloha izany, ary tsy ilaina izany tsanganana manontolo izany. Ny tanjoko eto dia ny hampifanaraka ny fitakiako meta-etika avy amin'ny tsanganana teo aloha amin'ilay Andriamanitry ny fiaramanidina teolojika (Joosy-Kristianina) izay iheverana fa tsara Izy. Resadresaka ara-teolojia mazava io (fa tsy meta-ethika).
Ny olana Othipron momba ny soatoavina ara-pivavahana
Imbetsaka aho taloha no nanamarika ny fahasamihafana misy eo amin'ny soatoavina ara-pivavahana sy ny soatoavina ara-moraly (jereo ohatra ny tsanganana 15, Fiantombohan'ny bokiko Mandeha eo anelanelan'ny fijoroana Ary maro hafa). Ny vahaolana arosoko amin'ny fifanoherana misy eo amin'ny halakhah sy ny fitondran-tena dia mifototra amin'ny hoe rafitra roa tsy miankina ireo. Ny Act X dia azo atao halakhically (satria mampiroborobo ny soatoavina ara-pivavahana A), saingy amin'ny fotoana iray dia voarara ara-moraly (satria manafintohina ny soatoavina ara-moraly B). Ny soatoavina ara-pivavahana dia maloto fitondran-tena, ary indraindray dia afaka mifanipaka tanteraka amin'ny soatoavina ara-moraly izy ireo ary indraindray amin'ny toe-javatra misy fifandirana ihany (rehefa amin'ny toe-javatra sasany ihany no mitranga ny fifandirana). Ny hevitro dia tsy misy sakana amin'ny fifanoherana toy izany, ary raha ny marina dia marina kokoa ny filazana fa tsy fifanoherana ireo (tsy misy fahasarotana eo amin'ny sehatra teorika amin'ny toe-javatra toy izany), fa fifandirana (sarotra ny manapa-kevitra hoe inona no tokony hatao. atao amin'ny ambaratonga azo ampiharina).
Taorian'izany dia nametraka izao fanontaniana manaraka izao i Tirgitz (bMiresaka indray Ho an'ny tsanganana teo aloha):
Midika izany fa ao amin'ny tsanganana manaraka ianao dia hiresaka momba ny euphron momba ny soatoavina ara-pivavahana sy ny soatoavina hafa, izay araka ny hevitrao dia soatoavina izay mamela ny tenany hanesorana ny adidy ara-moraly. Ary izany dia midika fa na Andriamanitra aza dia tsy nanao an-keriny.
Hazavaiko ny fanontaniany. Araka ny fomba fijeriko dia mandidy antsika Andriamanitra mba hanana fitsipika manohitra ny fitondran-tena mba hampiroboroboana ny soatoavina ara-pivavahana. Raha izany no izy, hoy i Tirgitz, dia toa terena aminy ihany koa ny soatoavina ara-pivavahana fa tsy vokatry ny sitrapony (ny lalàna mifehy azy). Raha toa ka tsy “zava-misy halakika” nampiharina tamin’Andriamanitra ireo didy fa noforonina tamin’ny alalan’ny lalàny, dia azony natao tamin’ny fomba hafa izany. Amin'ny toe-javatra toy izany dia manantena aho fa raha te (sy nandova) hanao soa izy dia tsy hanao lalàna mifanohitra amin'ny fitondran-tena. Ny fisian'ny fifandirana dia manondro fa ny lalàn'ny halakhah (na soatoavina ara-pivavahana, izay mampiroborobo ny lalàn'ny halakhah ihany) dia terena amin'i Gd ihany koa, ka noho izany dia tratra izy (na mampijaly antsika) noho ny filana amin'ireo fifandirana ireo.
Fanontaniana lehibe io, ary heveriko fa marina ny azy. Tahaka ny misy ny zava-misy etika dia misy ihany koa ny zava-misy halakhic. Ireo sy ireo dia tsy miankina amin’Andriamanitra ary terena Aminy. Tany am-piandohan'ny boky fahatelo ao amin'ny trilogy dia saika nampitaha ny sarin'ny Kantian momba ny fitondran-tena aho amin'ny fanajana ny lamina voasokajy amin'ny sary halakhic atolotro hanao mitzvah ho fanajana ny fanoloran-tena amin'ny didy. Hitantsika eto fa mitohy izany fanoharana izany.
Izany dia mitondra ahy amin'ny fanontaniana iray hafa nataon'i Tirgitz, izay nanontaniana andro vitsivitsy talohan'izay (jereo ny fifanakalozan-kevitra mihodinkodina ao amin'ny kofehy Eto). Amin'ny toe-tsaina ara-moraly dia mahazatra ny mieritreritra fa amin'ny toe-javatra misy fifanoherana eo amin'ny soatoavina, dia na dia nanana fanamarinana hanao X sy hanilika Y aza aho, dia mbola misy olana izay nandalovako an'i Y. Tokony halahelo na alahelo aho. mandratra olona na manao zavatra maloto, na dia tsy maintsy nanao izany aza aho. Nanontany i Tirgitz raha tokony hiseho amin'ny teny halakhic (Q.) koa ny alahelo toy izany.niteny: "Fahoriana ho anareo ary alahelo ho ahy"). Izany hoe, tokony hanenenako ve fa satria nanao mitzvah aho dia tsy nanozongozona ny lulav (na satria narary aho dia tsy nifady hanina tamin'ny Yom Kippur), tahaka ny nanenenako fa satria nandeha niady aho dia tsy maintsy namono. olona (ary indraindray sivily koa). Raha fintinina, ny fanontaniany dia ny hoe misy fahasamihafana ve ny halakhah sy ny moraly amin'ity raharaha ity.
Namaly azy aho teo fa heveriko fa misy fahasamihafana eo amin'ny contexte: ao amin'ny contexte morale na dia misy soatoavina aza lavina eo anoloan'ny soatoavina hafa dia tokony halahelo foana aho na diso fanantenana noho ny fandehanana amin'ny soatoavina nolavina (nandratra olona aho) . Etsy ankilany, amin'ny halakhah raha tsy misy adidy ary efa nataoko izay adidy dia tsy misy antony hanenenako izay tsy notanterahako. Azo atao tsara izany ary tsy misy manimba.
Saingy io fanavahana io dia mihevitra fa ao amin'ny halakhah dia misy ihany ny didy ary rehefa tsy misy didy dia tsy nisy zavatra nitranga. Saingy raha ny sary mipoitra eto dia toa mila miverina amin'ny tenako aho amin'ity fanavahana ity. Raha mihevitra isika fa ny didy halakhic dia tonga mba hampiroboroboana ny soatoavina ara-pivavahana, dia na dia nandika ny halakhah ara-drariny aza aho (noho ny halakhah hafa izay nandà izany), dia mbola misy zavatra ao amin'ny tontolo ara-panahy ihany no manimba azy (mifanohitra amin'ny zava-misy halakhic aho ary nitondra fahavoazana ara-panahy). Toa hita amin'ny sary nasehoko teto fa tena tsy misy mahasamihafa ny halakhah sy ny moraly amin'ity resaka ity.
Na dia eo am-pandinihana bebe kokoa aza dia azo lazaina fa amin'ny teoria raha nanao zavatra aho dia nisoroka ny fahasimbana ara-panahy (jereo Articles Amin'ny asidra citrique amin'ny Paska, izay nitondrako loharano manoratra izany). Azo lazaina fa manao fahagagana sy misoroka ny fahasimbana i Gd mba tsy hisian'ny loza ho an'ny olo-marina toa ahy izay mahatoky amin'ny lalàna. Mazava ho azy fa tsy mitranga eo amin'ny sehatra ara-moraly izany. Na dia tsy maintsy nanimba ny soatoavina ara-moraly aza aho, dia tsy azo ihodivirana ny fahasimbana. Ny fahasamihafana dia avy amin'ny hoe ao amin'ny contexte morale dia zava-misy ara-batana ireo ary amin'ny contexte halakhic dia zava-misy ara-panahy. Andriamanitra dia tsy manova ny fizika satria tsy mitsabaka amin'ny fitondran'ny tontolo physique izy fa manova ny zava-misy ara-panahy (satria ao amin'ny tontolo ara-panahy dia mitsabaka izy. Ao izany tsy atao mekanika). Tsara ho marihina fa na dia tsy zava-misy ara-batana aza ny zava-misy ara-moraly, dia miankina amin'ny zava-misy ara-batana (fanimbana na fijaliana ho an'ny olona iray ohatra). Ohatra, raha nangalatra vola tamin'olona aho mba hamonjena aina, dia na dia azo atao aza izany ary mety ho mitzvah aza dia ny fahasimban'ny mpangalatra no nitranga ary tsy misy antony hanenenana izany (eto dia tsy hisy fahagagana ho an'Andriamanitra. hamerina ny vola aminy).
Ny fiantraikany dia ho an'ny tranga araka ny nolazaiko tao amin'ny tsanganana teo aloha, izay ny baiko categorical dia milaza amiko fa tsy tokony hanao X aho na dia tsy misy vokatra ratsy aza. Amin'ny toe-javatra toy izany dia toa raha lavina amin'ny sanda hafa ilay zavatra dia tsy misy hanenenana. Mitovy amin'ny zava-misy eo amin'ny tontolon'ny halakhic izany. Ohatra, eritrereto hoe manangona hetra NIS arivo aho mba hamonjena ny ain'ny olona iray. Amin'ny tranga toy izany dia tsy misy hanenenako ny fandosirana hetra satria tsy misy vokany ratsy izany (nazavaiko tamin'ny tsanganana teo aloha izany). Ankoatra ny vokatra manahirana izay tsy misy, ny eto dia fandikana ny lamina manara-penitra ihany, saingy mazava ho azy fa nohamarinina izany tamin'ireo toe-javatra ireo. Raha ny marina dia marina kokoa ny filazana fa tsy nandika ny lamina sokajy mihitsy aho tamin'ny toe-javatra toy izany. Ny lalàna ankapobeny dia milaza fa tokony hiala amin'ny hetra ny tsirairay mba hamonjena aina.
 Tao amin'ny tsanganana teo aloha dia nohazavaiko ny antony tsy ilana fanamarinana ny lalàn'ny fifanoherana amin'ny maha-fanamarinana lojika-famakafakana azy. Ity dia hevitra mitovy amin'ny lafiny hafa kely.
 Eritrereto ny fanontaniana hoe afaka mamorona rindrina mahatohitra ny bala rehetra ve Andriamanitra ary koa ny bala iray izay miditra amin'ny rindrina rehetra. Ny valin'izany dia ratsy mazava ho azy, satria raha ny baolina noforoniny dia miditra amin'ny rindrina rehetra dia tsy misy rindrina mahatohitra azy, ary noho izany dia tsy misy rindrina mahatohitra ny baolina rehetra, ary ny mifamadika amin'izany. Ny tsy fahafahan'Andriamanitra mamorona zavatra roa toy izany miaraka dia tsy manimba ny fahaizany. Amin'ny ambaratonga lojika fotsiny dia tsy misy izany zava-misy izany. JEREO NY Eto Fihetseham-po amin'ny fanontaniana vato fa tsy afaka manandratra Andriamanitra, aryEto Momba ny resaka faharatsiana voajanahary (jereo koa ny boky faharoa ao amin'ny trilogy ao amin'ny toko fahafolo).
 Ny fehin-kevitra dia tsy mitovy amin'ny antsika ny hatsarany (sioka). Tsy manana lalàna mankatò izay ankatoaviny izy, fa izy no manome fahefana azy ireo. Ny olona dia voafatotry ny lamina categorical izay manan-kery nomena azy, ka noho izany dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ny hanao zavatra mifanaraka amin'izany. Mifanohitra amin’izany kosa, Andriamanitra dia tsy manolo-tena, fa misafidy ny hanome azy io ho manan-kery. Ramchal dia hilaza fa ny toetrany dia ny manao ny tsara.
 Eo am-piandohan'ny tsanganana iray 278 Efa niresaka momba ny nehma dhakisufa aho, ary toa mamaly an'io fanontaniana io koa ny dinika any.
 Jereo ireo lahatsoratra momba ny filaharan'ny sokajy ao amin'ny halakhah, izay mampiseho ny fitohizan'ny fanoharana eo amin'ny halakhah sy ny fitondran-tena, fa amin'ity indray mitoraka ity dia mikasika ny votoaty fa tsy ny rafitra lojika. Eto aho dia miady hevitra fa ny lamina sokajy dia manana sata halakhic.
 Heveriko aloha no hitondrako eto izay mbola mila incandescence. Heveriko fa misy fahasamihafana ihany koa. Ao amin'ny tontolon'ny fitondran-tena dia misy ny fanoloran-tena amin'ny soatoavina ara-moraly, fa ao amin'ny halakhah dia misy ny fanoloran-tena amin'ny soatoavina ara-pivavahana sy ny adidy hankatò ny baiko noho ny maha didin'Andriamanitra azy (na inona na inona zava-misy fa mampiroborobo ny soatoavina ara-pivavahana ihany koa izany. ). Ny fiheverana eto dia tsy misy didy avy amin'Andriamanitra ny amin'ny fitondran-tena fa ny sitrapon'Andriamanitra ihany no ahafahantsika manao izany. Tsy manana sata mitzvah ao anatin'ny rafitry ny halakhah ny filaharana sokajy (na dia milaza aza aho fa manana sata halakhic izany. Jereo ny lahatsoratro Eto).
Manaraka izany, rehefa tsy mifady hanina amin'ny Yom Kippur aho satria marary, dia tsy misy ny haben'ny didy, satria ny didy amin'ny toe-javatra toy izany dia ny mihinana fa tsy ny mifady hanina. Ka noho izany fihinanana izany dia tsy nisy ratsy nitranga ary tsy misy hanenenana. Amin'ny lafiny iray, amin'ny toe-javatra ara-moraly, na dia lavina ara-drariny aza ny soatoavina sasany, ny adidy ara-moraly hitazonana azy dia tsy miova (afa-tsy hoe tsy azo ankatoavina. ' ary tsy 'avela'). Fa ao amin'ny halakhah dia misy ihany koa ny refin'ny vokatr'izany (ny fanitsiana noforonina avy amin'ny mitzvah sy ny fahapotehan'ny fandikan-dalàna), ary amin'io lafiny io dia toa misy fitoviana amin'izay hitantsika teo amin'ny tontolon'ny moraly. Misy ifandraisany amin'ny fanavahana ny fisian'ny de dicto sy ny fisian'ny de re, sns.
 Jereo ny fanamarihana ao amin'ny bArticles Momba ny sazin'i Halacha ao amin'ny Toko D, izay nivoahako nanohitra ny fomba mekanika amin'ny sazin'ny lanitra.
Valiny ny antso "Iza no namorona ny Mpamorona".
Hevitra 80 momba ny "Fijerena ny olana Othipron amin'ny fahazavan'ny adihevitra (Tsanganana 457)"
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 amin'ny 04:XNUMX
Manenina ny mpampivelona iray noho izy nosakana tsy hifady hanina tamin'ny Yom Kippur. Amin'ny resaka didy dia voasarona tanteraka - tsy misy afa-tsy izany. Mifanohitra amin'izany, ny didy hanara-maso ny fanahy sy ny fanahy dia mandalo bebe kokoa. Nanenina anefa izy, na dia fantany tsara aza fa ny hanina no didiny, satria tsy nifady hanina izy. Tsy ampy ny andro fifadian-kanina sy fanadiovana ary fanavotana izy. Hanilika ireo fihetseham-po ireo ho Afra Daraa ve ianao, ary hanilika azy amin'ny fiantsoana 'psychologie' - hevitra tsy raisinao? Sa misy fitaovana hafa eto izay mitovy amin'ny alahelon'ny tsy fahampiana ara-moraly?
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 amin'ny 01:XNUMX
Azoko tsara io alahelo io, ary raha ny hevitro dia azo antoka fa manana ny toerany izany. Ny noresahiko dia ny fanontaniana hoe misy intérêt/obligation (fa tsy halakhic) ny hanenenana. Raha fintinina dia ny normative no ifandraisako fa tsy ny level psychological. Raha resy amin'ny lalao baolina kitra ny olona dia miala tsiny, tsy ho pretra ve ianao amin'ny maha-tompon'ny tranom-bahiny anao?!
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 amin'ny 18:XNUMX
Tsy nanontany aho raha azonao ny alahelo, raha tsy hitanao ao ny soatoavina izay manakaiky na mitovy amin'ny fahaverezan'ny soatoavina ara-moraly. Tsy ho diso anjara amin'ny lalao baolina kitra.
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 amin'ny 49:XNUMX
Tsy mitovy amin'ny habeny, raha misy. Araka ny nosoratako tao amin'ny tsanganana, raha mihevitra fa manakana ny fahasimbana ara-panahy i Gd raha misy olona manao zavatra ara-dalàna, dia tsy nisy na inona na inona nitranga. Ary raha manenina ny fahavoazany (very experience) - mazava ho azy fa zony izany fa tsy voatery misy vidiny. Angamba izany dia maneho karazana Yarosh satria ny alahelo dia mampiseho fa zava-dehibe aminy ny zava-drehetra. Saingy ny alahelo ara-moraly dia zavatra mihoatra noho ny fitenenana hoe zava-dehibe aminy ny sandany. Ilay filazana fa tena nisy olana teto, afa-tsy hoe tsy meloka aho. Tsy nisy olana nitranga tao amin'ny contexte halakhic. Raha be indrindra dia very traikefa ianao.
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 amin'ny 13:XNUMX
Heveriko fa tsy misy porofo avy amin'ny hoe misy fanontaniana momba ny fitondran-tena momba an'Andriamanitra fa terena aminy ny fitondran-tena.
Ireo fanontaniana ireo dia mihevitra fotsiny fa Andriamanitra no nifidy ny didy momba ny fitondran-tena ho fitsipika faratampony, ary noho izany dia manontania hoe ahoana no mety hanoherana ny tenany.
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 amin'ny 18:XNUMX
Sharpener - ny fanontaniana dia manazava fa tsy mifanohitra. Izany hoe, mazava ho azy fa misy ny fanamarinana ara-môraly amin'izany, satria heveriny fa ny fitondran-tena no foto-kevitra manan-danja izay nofidian'ny vavony.
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 amin'ny 03:XNUMX
Tsy noheveriko fa nifandona izy. Ankoatra izay, raha tsara izy dia tsy zava-dehibe ny antony manosika. Saingy heveriko fa very ny feon'ireo fanontaniana ireo ianao: mametraka azy ireo ho fanontaniana lojika (momba ny firindrana), fa ireo fanontaniana ireo dia etika. Toy ny hoe i Abrahama, izay nandidy ny hankatò ny zanany, dia manontany tena momba ny tsy fitovian’i Jehovah izay nampanantena fa hiantso azy ho taranaka i Isaka, ary tsy hiraharaha ny fanontaniana hoe ahoana no ahafahan’Andriamanitra mandidy izany zavatra izany. Ho anao ireo fanontaniana lojika mitovy ireo roa ireo. Tsy izany no tian’ny poeta holazaina.
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 amin'ny 35:XNUMX
Raha ny momba ny fanontanian'i Tirgitz - tena fanontaniana tsara izany, satria ny fahatsapana dia ny hoe Halacha dia tsy mitovy amin'ny adidy ara-moraly (tahaka ny fizarazaran'i Maimonides eo amin'ny didy ara-tsaina sy ara-pandrenesana, sns.). Ny fomba iray hanazavana an'izany dia ny hoe i Gd dia iharan'ny andiana ara-panahy iray manontolo izay tsy azontsika - ary avy eo dia hapetraka ho azy koa ny fanontaniana - raha toa i Gd dia iharan'ny fehezan-dalàna misaratsaraka toy izany, dia toa io andian-dalàna io. dia olona ambony, karazana Spinoza Andriamanitra Tsy manokana sy tsy miraharaha, fa ao amin'ny tontolo "voajanahary" tsy ara-batana. Raha ny fahitako azy dia tena malemy ka tsy misy mihitsy ny resaka fanambaniana an'Andriamanitra amin'ny lalàna momba ny lalàna lojika, araka ny fanazavanao (fa tsy "lalàna") ireo, ary somary matanjaka kokoa amin'ny resaka lalàna ara-moraly. , satria efa niady hevitra ianao - tery kely nefa fitakiana azoko ekena - fa ilaina toy izany koa izy ireo. Saingy raha ny lalàna halakhic no resahina dia sarotra kokoa ny manaiky, raha ny hevitro. Satria ny filan'izy ireo dia tafiditra amin'ny famoronana tontolo iray izay ilainy, toa, ary eo anatrehan'izany dia toa tsy ilaina izany (ny tohan-kevitra dia hoe ilaina amin'ny ambaratonga ambony indrindra izy ireo, nefa mbola tsy azo takarina - izay tena maika, raha tsy nisy namorona izao tontolo izao miaraka amin'ireo lalàna ireo. Izany koa dia marina amin'ny lalàn'ny fitondran-tena ("" Cause pain is bad "dia filazana izay tsy misy ifandraisany afa-tsy amin'izao tontolo izao misy fanaintainana - ary ny fanontaniana lehibe dia ny antony namoronan'Andriamanitra fanaintainana teto amin'izao tontolo izao fa tsy ny antony nilazany izany. tsy tokony hiteraka fanaintainana), ary na izany aza dia toa matanjaka kokoa eto amin'izao tontolo izao izay nandehanako izay toa tsy misy dikany ny fitsipika. Na ahoana na ahoana, izany dia mametraka an’Andriamanitra ao amin’ny tontolo iray izay nialoha azy ary tsy nahafehy azy. Etsy ankilany, misy teorika hafa azo atao hiatrehana io fanontaniana io, izay tsy haiko izay eritreritro - ny filazana fa Andriamanitra dia afaka misafidy tontolo iray izay ny lalàn'ny fitondran-tena ihany no manan-danja amin'ny maha-adidy maha-olombelona azy, ary afaka misafidy izy. tontolo iray izay iharan'ireo lalàna ireo amin'ny soatoavina hafa. Ary nisafidy ny safidy faharoa izy satria raha tsy misy ny toe-javatra toy izany, dia zara raha hijery ireo lalàna ireo isika, mazava ho azy (araka ny nosoratan'i Maimonides momba ny hazon'ny fahalalana sy ny doc). Araka izany fahafahana izany - ny fisian'ny tontolo halakhic izay mifanohitra amin'ny lalàn'ny fitondran-tena indraindray dia hamarinina noho ny antony ivelany, tsy ilaina, ary tsy mitaky tontolo iray manontolo ny fitsipika izay iharan'Andriamanitra. Etsy ankilany, araka ny voalaza, dia toa mampisalasala ihany ny fanapahan-kevitra hamorona tontolo toy izany.
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 amin'ny 07:XNUMX
Tsy azoko ilay fitakiana. Hevitra roa ihany no holazaiko ao amin'ny fanamarihanao (izay antenaiko fa azoko):
1. Tsy mihatra ny lalàna. Ny famaritana ny tsara sy ny ratsy dia tsy voatery ho eo fa mety ho zava-misy. Noho izany dia tsy misy azo resahina ny fanontaniana hoe ambony noho Andriamanitra ve izy ireo sa tsia.
2. Ny lalàn'ny fitondran-tena dia lalàna eto amin'izao tontolo izao ihany koa. Raha nisy tontolo hafa noforonina izay tsy nitovy tanteraka tamin’ny zavaboary naorina tamin’ny fomba hafa tanteraka (tsy nanana alahelo sy fijaliana izy ireo), dia ho nihatra tamin’izany ny lalàna hafa. Fa raha lalàna ara-moraly izy ireo dia fampiharana ireo lalàntsika ara-moraly ireo amin'ireo toe-javatra ireo. Izany indrindra no nolazainao momba ny halakhah, ka toa tsy misy mahasamihafa azy.
Ny zanany lahy Yitzhak Koren
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/20 amin'ny 32:XNUMX
“Ny filazana momba ny maha-izy azy rehetra amin'ny karazana: a dia b. Raha heverina fa marina io fanambarana io, dia midika izany hoe: a dia midika hoe tautology poakaty. " - Sarotra amiko ny mahita ny olana eto. Raha heverina fa marina io filazana io, dia mitovy amin'ny lojika ny fitakiana A = A, fa koa ny fitakiana 1 + 1 = 2 sy ny fitakiana marina hafa. Raha ny hevitr'ilay fehezanteny dia ny fampahalalana ampiany, dia tsy misy fehezanteny manana "midika hoe mitombina izany." Raha mihevitra / mahafantatra isika fa marina izany, dia tsy manampy vaovao ho antsika ny filazana indray fa marina, ary noho izany dia tsy manan-danja.
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/20 amin'ny 44:XNUMX
Ary amin'ny teny hafa: manana dikany izy fa tsy mampianatra.
Ny fitondran-tenan’ny rainao
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/23 amin'ny 10:XNUMX
Ny zava-manahirana an'i Uthron tsara tarehy dia ho an'ny sampy, izay tsy mazava tsara hoe hatraiza ny fiheverana azy ireo amin'ny fitondran-tena. Araka ny angano kosa, dia mazava fa feno fialonana sy hery izy ireo.
Mifanohitra amin’izany, ny Andriamanitry ny Isiraely no loharanon’ny fahamarinana sy loharanon’ny tsara. Tsy ‘iharan’ny’ fitondran-tena sy fahamarinana izy. Izy no fahamarinana sy fitondran-tena amin’ny fahadiovan’izy ireo tonga lafatra. Isika amin'ny maha-mpamorona antsika dia potika kely ny fahalalantsika. Isika dia mahafantatra kely amin’ny alalan’ny saintsika sy ny saintsika ary ny fandalinantsika, fa ny zavatra fantatsika dia sombin-javatra kely avy amin’ny sary feno, izay ny Mpamorona izao tontolo izao ihany no mahalala amin’ny ankapobeny ary Izy irery ihany no mahalala ny tanjony.
Ny fahasahiranana ara-pitondran-tenantsika momba ny lalan’ny Mpamorona dia toy ny fahasahiranan’ny zaza izay tsy mahatakatra ny antony nikapohana ny tanany ny rainy raha vao nanandrana nanindrona tantanana teo amin’ny fivoahana herinaratra izy, ary tsy azony hoe nahoana no natolotra ny rainy ny rainy. ny andiana vatokely fotsy masiaka misintona ny antsy sy mamiravira ny nofon’ilay zazalahy mampalahelo.
Ho an’ireo ray aman-dreny olombelona dia efa nahazo tombontsoa sahady izahay fa tonga ny kapoka teo amin’ny tanana mba hamonjena ilay zaza tsy ho voan’ny herin’aratra, ary ireo “mpanendaka antsy miakanjo fotsy” dia manao fandidiana mamonjy ain’ilay zaza. Vao mainka aza ny fihetsiky ny Mpamorona izao tontolo izao, izay nanao fikarohana an-jatony taona maro ho an'ny olombelona mba hahatakarana kely ny halalin'izy ireo - fa avela hanome 'crédit' ny Mpamorona antsika isika, fa ny fijaliana sy ny fampijaliana nataony. dia mitondra antsika ho tsara koa ho antsika, mba hanomanantsika antsika eo amin'ny lalantsara.Mialà, ary aoka ho fantatsika amin'ny fontsika fa raha misy ray mampijaly ny zanany, dia mampijaly anao ny Elkika.
Miarahaba, Othipron Nefshatim Halevi
'Ny fitondran-tenan'ny rainao' sy 'ny fampianaran-dreninao' - manaiky zioga na fahalalana sy famantarana?
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/02 amin'ny 05:XNUMX
Raha manana ny maha izy azy tanteraka ny Mpamorona eo amin’ny sitrapony sy ny zava-bitany, dia afaka manana elanelana eo amin’ny fahatsapany ny tsara sy ny tsara sy ny toromarika azony avy amin’ny Mpamorona ny olombelona. Ary io elanelana io dia tsy hoe 'azo atao' fotsiny fa ilaina, fa ahena izany raha mbola mihalalina sy mahatakatra bebe kokoa ny sitrapon'i Kono ilay olona.
Eo anatrehan’izany, dia mety ho afa-po amin’ny fanekena zioga iray ny olona iray noho ny fahatokiana fa ny Mpamorona izao tontolo izao dia miasa amin’ny fitsarana na dia tsy azon’ny olona aza, nefa tsy ampy izany. Satria tsy tokony ho 'andevo' tsy mivadika amin'i Kono ihany ilay olona, ​​fa 'mpianatra' mahay mamadika ny sitrapon'i Kono na dia amin'ny toe-javatra tsy nahazoana toromarika mazava aza.
Ho an'ny 'andevo' dia ampy ny mandidy ny 'manao izany' na 'manao izany'. Tsy hanao dingana izy raha tsy mahazo fampianarana mazava, fa mba ho 'mpianatra' mahay mitantana ny sitrapon'ny rabyny na dia ilaina aza ny 'mahatakatra zavatra amin'ny zavatra iray' dia tsy maintsy misy ny fahatakarana ny hevitry ny zavatra, izay ahafahany mampihatra ny foto-kevitra.
Noho izany dia nomena Torah nosoratana avy any ambony ny teny hoe 'voasokitra eo amin'ny vato fisaka', fa tsy maintsy ho 'Torah am-bava' koa izay mikatsaka ny hahatakatra ny tsirony sy ny lojikan'ny lalàna Torah, ary avy amin'ny fahatakarana ny halalin'ny lalàna. Lalàna Torah - ny olona iray dia afaka mandray ny fanahin'ny zavatra.
Amin'ny alalan'ny Torah am-bava izay manazava ny lalàn'ny fahafahana - ny olombelona dia afaka amin'ny 'dilema an'i' Yifron ', satria ny sitrapon'ny Mpamorona izay nanomboka tamin'ny 'fandraisany zioga ivelany' - dia mihamitombo hatrany ny 'Torah Delia' izay miaraka aminy. azony sy fantatr’izy ireo.
Misaotra, Enoch Hanach Feinschmeker-Felti
Marina sy diso
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/03 amin'ny 12:XNUMX
“Fa rehefa voasazy ny ota [ny olona ao amin’ny hazon’ny fahalalana] noho ny tsy fananana fahaiza-manao mitovy amin’izany… ka izany no ilazana hoe: ‘Ary ianareo dia tahaka an’Andriamanitra mahalala ny tsara sy ny ratsy’ ary tsy manao hoe: ‘Fantatry ny lainga sy ny fahamarinana’. 'mpanatanteraka ny lainga sy ny fahamarinana'.
Ary amin’ny zavatra ilaina dia tsy misy tsara sy ratsy mihitsy fa lainga sy fahamarinana” (Mon., Fizarana I, P.B.)
Angamba i Maimonides eto koa dia miresaka momba ny zava-misy etika ary manala ny dilemma Eitipron?
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/10 amin'ny 30:XNUMX
Jereo ny tsanganana 177 izay nanazavako fa fahalalam-pomba izany fa tsy fitondran-tena.
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/12 amin'ny 59:XNUMX
Misaotra tamin'ny reference, namaky aho, mety tsy azoko, fa tsy hitako izay olana tamin'ny tenin'i Maimonides.
Amiko dia tokony hozaraina roa ny fehezanteny:
"Ary ianao dia tahaka an'Andriamanitra mahalala ny tsara sy ny ratsy" - izany dia momba ny fahatsiarovan-tena nivoatra tao anatinao ho an'ny olo-malaza, tsara tarehy sy vetaveta, na tsara na ratsy. Koa ankehitriny ny fitondran-tena dia toa tsara sy ratsy ihany koa.
“Ary [ny andininy] dia tsy nilaza lainga sy fahamarinana na izay mahazo lainga sy fahamarinana, ary amin’ny zavatra ilaina dia tsy misy tsara sy ratsy mihitsy, afa-tsy lainga sy fahamarinana” – eto ny Maimonides dia midika hoe fitondran-tena. Izany hoe, amin'io lafiny io dia niala tamin'Andriamanitra ianao ary very ny fahaiza-manao ara-tsaina izay nanananao teo aloha mba hahitana ny fitondran-tena ao amin'ny sokajy misy ny zava-misy-Andriamanitra dia ny fahamarinana sy ny lainga.
Tokony hovakiana ho fanontaniana sy valiny izany - ary nahoana no tsy nilaza ilay andininy hoe "lainga sy fahamarinana"? Valiny - satria very ianao. Fa ho fantatrao fa tena, miaraka amin'Andriamanitra, ny zavatra ilaina (moraly) dia tsy tsara sy ratsy fa diso sy marina. Ary eto dia tsy ilaina ny olana amin'ny Eitipron.
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/13 amin'ny 52:XNUMX
Tsy tadidiko intsony ny teny marina, fa tsapako fa ny fahalalam-pomba ihany no resahina fa tsy ny fitondran-tena. Na izany na tsy izany, na dia marina aza ny hevitrao dia misy fanambarana sasany ao amin'ny Maimonides izay tsy manakana ny olana amin'ny Eitipron. Amin'ny ankapobeny dia azonao atao ny miady hevitra fa i Maimonides dia nanana ny toerany manokana momba ny olana.
Ny fitondran-tena-fangoraham-po sa ny fitondran-tena-fisorohana?
24 Adara 03 2022 - 00/50/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Ao amin'ny SD ACH Tov ao amin'ny Adash XNUMX
Ny fifanoherana dia tsy eo amin'ny 'fivavahana' sy ny 'fitondran-tena' fa eo amin'ny 'moraly fangoraham-po' sy ny 'moraly deterrence'. Detersh kosa dia manana fitondran-tena manakana mba hitondra valifaty feno habibiana amin'ny mpanota izay hanala amin'ilay mpanota ho avy ny 'oh amena' rehetra amin'ny fiverenan'ilay heloka.
Eto isika dia mila ny 'lalàn'Andriamanitra' izay hanome ny fatra mety izay hitondra fifandanjana eo amin'ny filàna fanakanana lehibe sy ny fanirian'Andriamanitra hamindra fo sy hamela ny fanitsiana.
Noho izany, ohatra, ny fanafoanana dia mitaky ny famongorana hatramin’ny fotony ireo vahoaka namolavola foto-pisainana fankahalana sy faharatsiana - ny Amalekita sy ny vahoakan’i Kanana - ary etsy ankilany, ny fangorahana dia mitaky ny fiantsoana azy ireo ho amin’ny fihavanana aloha sy ny famelana azy ireo handositra amin’ny alalan’ny ‘fanovana tari-dalana’. amin'ny fanekena ny soatoavina fototry ny finoana sy ny fitondran-tena.
Miarahaba, Hasdai Bezalel Kirshan-Kwas Cherries
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/01 amin'ny 49:XNUMX
Telozoro boribory vita amin'ny marbra natsangana. Izy io dia zavatra mitazona ny toetran'ny telozoro ary koa ny fananana rehetra amin'ny faribolana.
Ny zavatra telozoro boribory dia sady boribory no vita amin'ny tsipika mahitsy telo.
Na dia mifanohitra amin'ny lojika andavanandro aza izany, soa ihany fa tsy mandihy amin'ny feon'ny lojikantsika ny zava-misy. Raha tsy izany dia tsy nisy isika.
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/14 amin'ny 20:XNUMX
Tsy heveriko fa ilay sary nofaritanao dia mampiseho fa ny soatoavina ara-pivavahana dia terena amin'Andriamanitra. Noho ny maha-izy azy, ny tenany dia manam-pahefana afaka mamaritra fa ny soatoavina ara-pivavahana sasany (izay noforoniny) dia manan-danja mba handavana ny soatoavin'ny fitondran-tena. Ny hoe mifamatotra ny soatoavina ara-moraly dia tsy voatery midika fa izy ireo no voalohany amin'ny lisitry ny laharam-pahamehana.
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/14 amin'ny 23:XNUMX
Amiko dia toa tsy azonareo ny hevitro (na an'i Tirgitz). Raha heverina fa eo am-pelatanany ny soatoavina ara-pivavahana izay midika fa afaka mamaritra izany araka izay tiany izy, dia tsy misy antony eto amin'izao tontolo izao hamaritana soatoavina ara-pivavahana mifanohitra amin'ny fitondran-tena. Nahoana no manao izany raha afaka mamaritra ny soatoavina ara-pivavahana amin’ny fomba mifanaraka amin’ny fitondran-tena izy? Manaraka izany fa tsy eo an-tanany ihany koa ny soatoavina ara-pivavahana.
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/15 amin'ny 55:XNUMX
Raha izany dia tena tsy azoko teo aloha, fa na izany aza dia tsy tonga ao an-tsaiko, noho ny antony roa:
1. Mety tsy ho azo atao ny mamorona rafitra ara-pivavahana mifanaraka tanteraka amin'ny fitondran-tena (araka ny teninao momba ny famoronana tontolo tsy misy ratsy). Tsy midika akory izany fa terena izy, satria afaka manome azy tanteraka izy, mifanohitra amin'ny toe-javatra misy ny fitondran-tena. Saingy raha mihevitra izy fa maniry iray noho ny antony iray, dia tsy maintsy mifanipaka amin'ny soatoavina ara-moraly sasany izany. Azo inoana fa nifidy ny iray izay tonga marina indrindra izy, ary izany koa dia manazava ny fifandraisana lehibe eo amin'ny soatoavin'ny Torah sy ny soatoavina ara-moraly.
2. Andriamanitra dia afaka manonitra, na amin’izao tontolo izao na amin’ny ho avy, izay olona voahitsakitsaka ara-moraly vokatry ny fisian’ny soatoavin’ny Torah. Afaka mahazo antoka izy fa amin'ny famintinana amin'ny ankapobeny ny haavon'ny fahasambarany dia ho toy ny tokony ho tsy misy ny lanjan'ny Torah.
C. Bader B. H. 05 - 03/2022/19 amin'ny 36:XNUMX
1. Midika izany fa terena aminy izany. Raha mametraka ny rafitra araka izay tiany izy dia tsy misy teritery dia inona no misakana ny fampifanarahana amin'ny fitondran-tena?
2. Mety ho marina ny hoe afaka manonitra ny fiovana izy. Saingy tsy misy antony eto amin'izao tontolo izao hanaovana izany. Afaka mametraka ireo soatoavina ireo hifanaraka amin'ny fitondran-tena izy.
C. Bader B. H. 05 - 03/2022/19 amin'ny 52:XNUMX
1. Mametraka ny rafitra araka izay tiany izy, saingy tsy midika izany fa misy rafitra misy ny soatoavina ara-pivavahana miaraka amin'ny fanitsakitsahana ny fitondran-tena. Tsy afaka manangana rafitra ara-pivavahana izy, na mifidy amin’ireo izay manimba ny fitondran-tena faran’izay kely indrindra.
Satria afaka nisafidy ny tsy hamorona izao tontolo izao izy, fa (angamba) tsy afaka namorona izao tontolo izao miaraka amin'ny tombontsoa rehetra eto amin'izao tontolo izao fa amin'ny 0 ratsy. Tsy midika akory izany fa terena aminy ny famoronana izao tontolo izao, fa raha tiany (!) Ny hamorona tontolo misy safidy malalaka dia hisy koa ny faharatsiana ao anatiny.
C. Bader B. H. 05 - 03/2022/20 amin'ny 32:XNUMX
Tsy azoko io fiziriziriana io.
Raha tsy misy fameperana tsy miankina aminy, inona no manakana azy tsy hanapa-kevitra fa ny vehivavy Cohen izay voaolana dia tokony hisaraka amin'ny vadiny? Afaka namaritra ny mifanohitra amin'izany izy (omeo ny Torah raha tsy misy an'io antsipiriany io). Inona no teritery manakana azy tsy hanao izany? Eo amin'ny tontolon'ny faharatsiana, dia nanazava aho fa ny lalàn'ny natiora henjana dia mety tsy hisy raha tsy misy ny fijaliana sy ny faharatsiana. Tsy misy rafitra hafa. Tsy misy teritery amin’izy ireny anefa ny rafitry ny lalàna ara-pivavahana. Tsy misy dikany izy ireo. Inona àry no manakana azy tsy hanapa-kevitra afa-tsy didy efatra ambin'ny folo tsy misy vadin'i Cohen ao amin'ny tontolon'ny fivavahana?
C. Bader B. H. 05 - 03/2022/20 amin'ny 34:XNUMX
Rabi Narali, tokony hanoratra tsanganana ianao (na nanoratra ianao fa tsy fantatro izany)
Mikasika ny ampahany amin'ny halakhah izay voafatotry ny zava-misy ary koa avela sy lavina, sns.
C. Bader B. H. 05 - 03/2022/20 amin'ny 45:XNUMX
Tsy azoko ilay fangatahana
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/15 amin'ny 24:XNUMX
[Nanao izay tsy mpandresy ianao amin'ny maha mpandresy anao. Nahatsapa zavatra manjavozavo fotsiny aho (ary avy tamin'ny teninao tamiko koa izany) fa tsy tamin'ny fomba maranitra nolazainao azy]
Asehon'ny sary fa tsy misy mahasamihafa ny halakhah sy ny moraly raha ny fifandirana no resahina, fa ny olombelona rehetra rahateo dia samy mahafantatra izany fahasamihafana izany ary mety ny maka ny intuition-ny amin'ny antsasany. Na dia manenina aza ny fatiantoka izay tsy nahazoany ny mitzvah na ny fahatsapana manokana miaraka amin'ny fisiany, dia tsy mbola naheno olona nanenina aho noho ny fandavana ny lao noho ny fandavana. , ary izany dia toa Tza'a), ary amin'ny fitondran-tena, ny olon-tsotra dia manenina ihany koa fa nandika lalàna ara-moraly, toy ny tsy fanavotana ny jentilisa kosher amin'ny Sabata.
Noho izany dia nanazava izany ianao tamin'ny teoria fa ao amin'ny halakhah Andriamanitra dia manamboatra ny fahasimbana ara-panahy ary amin'ny fitondran-tena dia tsy manamboatra ny fahasimbana ara-batana. Ahoana anefa no hamaliany, ary raha tsy misy imperative ara-moraly dia inona no fiheveran'ny olona ny fahavoazana ara-batana? Diso fotsiny ve izy ireo (sy izaho amin'ny ankapobeny) ary tsy misy tension normative eto fa fahatsapana tsy fahalalana fotsiny?
Mba hanazavana dia tokony ampiana fotsiny hoe mandra-pijanona ny didy ary na dia lavina aza dia mbola misy ihany ny didy tsirairay. Izany hoe ny didy dia tsy ny fampianarana azo ampiharina hoe "Ataovy izao" fa ny fampianarana mifototra, ary raha tokony ho fifanoherana dia misy didy tokoa eto sy didy eto ka noho izany koa fa tsy fifanoherana sy fanapahan-kevitra mazava no misy olana. . (afa-tsy izay toa tsy ilaina ny tonga amin'ny zava-misy ara-panahy isan-karazany).
Ary amin'ny ankapobeny dia io no Raqa (eny tokoa, hita voasoratra ao anatin'ny filana sy fanavaozana ao amin'ny fampielezan-kevitra ho an'ny fankalazana araka ny nanondroanao ahy. Tsy nandinika ny fampielezan-kevitra aho fa hitako fa milaza izy fa raha misy mitsoka ny shofar amin'ny Rosh Hashanah izay milatsaka amin'ny Sabata Raha ny marina fa ny fitsipika. Izaho * tena * tsy azoko io zavatra io, azonao hazavaina amiko ve izany? (Ao amin'ny valinteny eo no nanoratra ianao fa tena mihevitra izany ianao). Ity didy ity dia fampianarana azo ampiharina, tsy hitako izay dikany amin'ny filazana fa amin'ny lafiny iray dia mandidy an'i A aho ary an-kilany dia mandidy an'i B ary raha ny marina dia mandidy an'i B aho.
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/16 amin'ny 04:XNUMX
Tsy azonao hoe nahoana ianao no tsy mahita alahelo noho ny fahaverezan'ny mitzvah. Mazava ho azy fa an'izany. Toy ny olona tsy meme ao amin'ny fitsarana satria marary. Ary ny tantara dia fantatra momba ireo raby izay nanome toky azy sy nilaza taminy fa adidiny izany amin'ny toe-javatra misy azy. Ankoatra izany, tsy dia mahazatra loatra ny manao izany ary efa zatra ny olona. Ohatra amin'ny somotraviavin'ondry sy rongony fotsy madinika, tsy misy mahatsiaro fa misy shatnaz. Saingy amin'ny marary iray ao amin'ny URSS dia toe-javatra tsy fahita firy izany ary tena mampalahelo.
Mazava ho azy fa miahy ny fahavoazana ara-batana sy ny alahelon’ny hafa ny olona. Inona no anton'izany fa nataoko araka ny tokony ho izy. Ary raha misy olona mijaly noho ny loza voajanahary dia tsy manenina aho. Ka rehefa meloka aho (na dia marina aza izany) dia azoko antoka fa miala tsiny aho. Asio ny vahoaka Hezi amin'ny lozam-pifamoivoizana izay tsy tokony homena tsiny amin'izany, ary na dia ny fahavoazana aza dia omena tsiny, ny alahelony noho ny fahavoazana naterany.
Tsy tadidiko intsony ny teniko notononinao fa misy ny didy, fa nanoratra betsaka momba izany aho tao amin'ny boky fahatelo amin'ny andian-dahatsoratra lojika Talmudic. Ny boky manontolo dia natokana ho an'ny fanavahana ny fampianarana tsy maintsy atao sy ny fampianarana azo ampiharina. Ny didy dia karazana zava-misy, ary ny fampianarana azo ampiharina dia avy amin'izany ihany. Zava-misy halakhic. Nampahatsiahy ahy izany ianao.
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/18 amin'ny 01:XNUMX
Ny "quote" avy amin'ny teninao dia tao amin'ny valiny tao amin'ny kofehy tao rehefa nanandrana nanatsoaka hevitra tamin'ny RAKA aho fa ny didy dia tsy tenin'Andriamanitra fotsiny (raha ny tenin'Andriamanitra ihany dia tsy mitzvah amin'ny toe-javatra iray izay tena mandidy an'Andriamanitra amin'ny farany. tsy manao ary mandrara aza atao).Dia namaly ianao hoe: "Miombon-kevitra amin'ny analyse iray aho izay mahita ny fototry ny fiheverana ny mitzvos ho karazana zava-misy fa tsy ny fisian'ny tenin'Andriamanitra fotsiny." Mety tsy azoko tsara ny fikasanao tany, fa raha ny fahitako ny tenin'i RAA dia mbola tsy azoko mihitsy. Raha manampy ahy hahazo an'io hevitra io ianao dia ho feno fankasitrahana aho.
Ny amin'ny alahelo dia toa tsy mitovy amiko ny fahadisoan'ny olona noho ny fahazarana (traditional versus halakhic avy amin'ny boky) sy ny tena fototra, satria miala tsiny izy ireo fa tsy manitsaka ny ombelahin-tongony fa tsy manenina amin'ny tassel. ary babony na dia ampahatsiahivina aza. Fa io hevitra io no raisiko.
Ary ny zava-dehibe indrindra - raha ny fitondran-tena mamatotra afa-tsy noho ny imperative dia izay misy ny anti-moral imperative tsy misy shred olana normative na dia manimba fahavoazana arivo. Inona no valin'ny hoe mahatsapa fifandirana ny olona ary mamadika izany eo anatrehan'Andriamanitra araka ny voalazanao tao amin'ny tsanganana? Ny valinteninao dia raha ny fahazoako azy dia hadisoana izany ary tena tsy misy olana ara-dalàna mihitsy ny hanimba rehefa nesorin'Andriamanitra ny didiny ara-moraly mba tsy hanisy ratsy. Ary ny teoria momba ny fanamboarana ny fahasimbana ara-panahy sy ny tsy fanamboarana ny fahasimbana ara-batana dia natao hanazavana ny fihetseham-pon'ny olona fotsiny fa tsy hanamarina izany. izany ve?
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/19 amin'ny 52:XNUMX
Azo takarina izany amin’ny alalan’ny soso-kevitro momba ny tombontsoa ara-panahy. Misongadina ireo na dia tsy manana adidy hanao ny asa izay mitondra azy aza aho. Saingy mazava ho azy fa ny tombontsoa fotsiny dia tsy ampy hamaritana ny mitzvah. Ara-panoharana no hilazako fa misy mandrakizay koa ny didy. Saingy indraindray dia tsy maintsy mandalo izany noho ny didy hafa.
Ohatra iray amin'ny zavatra nataony ny fotoana nahatonga ny vehivavy. Ny faneken'ny saika ny mpanelanelana rehetra fa misy vidiny ny fanaovana izany, ary ny ankamaroan'izy ireo aza dia mihevitra azy io ho mitzvah misy (mitzvah misy) (Rabbi Brish dia midika fa i Safra no manoratra fa mandà ny tsia). Fa raha ny didin'Andriamanitra dia tsy afaka ny vehivavy. Tsy voatery hanao izany, ka inona no mitzvah ao raha nanao izany izy ireo?
Heveriko fa misy olana ara-dalàna ny fahavoazana ary ny alahelo dia tena misy fa tsy ara-tsaina fotsiny. Ny fahasimbana ara-moraly tsy mitovy amin'ny Andriamanitra ara-panahy dia tsy mamafa na dia nanao izay nilainao aza ianao.
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/21 amin'ny 15:XNUMX
Ny fanoharana milaza fa misy mandrakizay ny didy nefa tsy maintsy ampitaina dia maneho ny olana. Azo atao izany rehefa avy amin'ny zava-misy ara-panahy mangina eo amin'ny zorony ny loharanon'ny fanafihana ary toa tsy azo atao izany raha olona manan-tsaina ny mitzvah izay tsy maintsy milaza amiko izay tiany hataoko. Amin'ny fanaovanao izany dia ampitovianao amin'ny shofar ao amin'ny Tompo amin'ny Sabata ny didin'ny fahefana, izay mandrara ahy tsy hankatò ny olon-kendry. Ekeko fa sarotra ny mamaritra ny fizarana, fa raha tsy izany dia toa misy. Ny filazana fa manao ny didin’Andriamanitra aho raha mbola nikomy taminy sy nitsoka ny ampongatapaka na dia teo aza ny masony be voninahitra na dia teo aza ny fandrarana dia zavatra hafahafa. MM Raha izany no izy dia hisaintsaina an'io izy (amin'ny fomba mahaliana ny fampitahana amin'ny mitzvah manaraka amin'ny fandikan-dalàna sy ny dinika nentinao momba an'i R. Asher Weiss, dia hosaintsainiko koa izany. Ary hanitra kisoa no atelina ao. amin'ny fomba mandrara avy amin'i Dauriyta, angamba na i Raqa aza dia manaiky fa tsy misy didy hihinana)
Tsy azoko hoe inona no olana normative tokony hanimba raha tsy misy didy avy amin'Andriamanitra mandrara ny fanimbana an'io fahavoazana manokana io. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny tiana holazaina dia na dia ao anatin'ny fitondran-tena aza ny didy tsy hanisy ratsy dia mbola misy ihany fa tsy maintsy mandalo izany. Raha ny didy dia fikambanana manan-tsaina izay mahalala ny zava-drehetra ary manapa-kevitra ny amin'izay hatao amin'ny ekipa dia tsy tsapako toy ny etsy ambony io raharaha io. Araka ny voalaza dia hisaintsaina izany aho, angamba nijaly tamin'ny famakafakana kianja.
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/21 amin'ny 41:XNUMX
Momba ny fandrarana ny Dauriyta sy ny mitzvah, ohatra tsara kokoa amin'ny sorona natao rembiny (na ny hanina ao amin'ny fandrarana ho sakafo dia mitoetra ary tsy misy mitzvah na misy mitzvah koa ary nanao fandikan-dalàna) dia ny fahasahiranan'ny zanakavavy. amin'ireo rahalahy. Nandrara i Beit Hillel sy ilay zaza tsy ampy taona. Moa ve, araka ny hevitr'izy ireo, na dia ireo izay misaona ny fahorian'ny zanakavavy aza dia manatanteraka ny didin'ny fisaonana?! (Azo atao ny mizara ny fitsipika ao anatin'ny mitzvah sy ny fitsipika amin'ny mitzvos samihafa. Fa ny tena zava-dehibe dia toa mitovy tanteraka amiko izany)
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/22 amin'ny 55:XNUMX
Misy zava-misy ara-panahy, araka ny nosoratako tao amin'ny tsanganana. Saingy tsy manan-kery izy ireo raha tsy misy ny rafitra manara-dalàna sy / na mandidy azy ireo.
Tsy misy mahasamihafa antsika ny fandrarana sy ny tsy fisian'ny adidy. Ianao mihitsy no miaiky izany, dia zara raha manao sarotra. gaga aho!
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/01 amin'ny 01:XNUMX
Inona araka ny eritreritrao no mirona amin'ny voalohany, fa ny tenin'i Raqa dia ao amin'ny lau Dauriyta izay tsy lavina noho ny asa sasany raha misy ny asa ary nandika ny lao nahazo mitzvah ary niala tamin'ny adidy, na ny teniny. ao amin'ny fandrarana Durban ihany izay manafoana ny Dauriyta mitzvah?
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/07 amin'ny 14:XNUMX
Tsy mila hevitra sy intelligent aloha. Amiko dia misy porofo izany amin'ny hoe tsy manan-kery ny mitzvah manaraka amin'ny fandikan-dalàna. Ary efa nanantitrantitra ny maha-samihafa an'io fitsipika io ny voalohany ary nanao ny tsia. Na ahoana na ahoana, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, rehefa tsy nolavina ny lalàna noho ny antony (ohatra, tsy miaraka), dia toe-javatra iainan'ny Fitsarana Tampony izany.
Araka ny hevitrao, tsy ilaina ny andinin-teny momba an'io, satria ny toe-javatra dia tsy misy dikany amin'ny mitzvah toy izany. Fa ny Gemara dia mianatra izany avy amin'ny "izay mankahala ny jiolahy miakatra." Ankoatra izany, araka ny Thos.
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/10 amin'ny 29:XNUMX
Naneho hevitra teo ambony aho momba ny mitzvah manaraka amin'ny fandikan-dalàna fa ny ohatry ny sukkah voaroba fotsiny no noheveriko fa tsy fandikan-dalàna ny asan'ny mitzvah (ary misy ny dinikao momba ny tenin'i R. Asher Weiss sy Ezal). Hitako izao tao amin'ny Wikipedia ohatra ny fihinanana matzah atsoboka amin'ny Pesach ary lazain'izy ireo ao (tsy nojereko ny loharano) fa tsy mandeha amin'ny lalany izy ireo hanao matzah ary tsy mitandrina matzah matzah. Ary izany dia manaporofo tokoa araka ny voalazanao (angamba raha eo ihany izy rehefa tsy manana matzah hafa ka dia mazava fa mandrara azy Andriamanitra tsy hihinana ny matzah ny batisa).
Raha tsy misy andininy dia tsy ho fantatsika izay mitombo, izany hoe izay tena didin'Andriamanitra, angamba amin'ny matzah natsoboka no baikony eny raha tsy misy matzah hafa. Tsy haiko ny raharaha fa ny fandrobana ao amin'ny lazaina ho mpifindra monina Ny zava-baovao dia na dia rehefa avy nividy ny jiolahy sy ny mpifindra monina ho amin'ny tanjona rehetra sy ny avela hihinana azy noho ny fiankinan-doha dia mbola tsy mendrika ny alitara. [Ankoatra izany, ny hevitra hanaporofoana fa raha tsy izany dia "tsy ilaina ny andininy" dia mampiahiahy ary indrindra raha jerena ny tsanganana amin'ny andininy iray izay mampianatra ny mifanohitra amin'izany, satria manana hevitra etsy sy eroa isika ary ekeko mazava ho azy. fa RAKA no nilaza ny teniny ary ianao aza mihevitra fa azo ekena ny teniny dia manana olana aho mieritreritra fa mila andininy ianao hialana amin'io fanazavana io]
Na izany na tsy izany, eritrereto araka ny voalazanao fa izay mihinana matzah natsoboka dia tsy manaja ny didy matzah mihitsy ary nandika ny fandrarana ny matsoboka. Fa na iza na iza nitsoka ny ampongatapaka tao amin'ny Bara tamin'ny Sabata ho an'ny Ra'akah dia nanana didy hitsoka ary nandalo ny Sabata Durban.
Midika izany fa ao amin'ny fitsipiky ny fandavana ao amin'ny Torah ny mitzvah "ny tenany" dia voafaritra amin'ny toe-javatra izay tsy lavina ihany. Saingy ao amin'ny fitsipiky ny fandavana avy any Durban ny mitzvah Dauriyta dia "mijanona" afa-tsy raha ny marina dia voarara ny mitandrina izany ary tahaka ny fanoharana hoe misy mandrakizay ny didy fa indraindray dia tsy maintsy tapahina.
10 Adara 03, 2022 - 14/56/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Raha ny soso-kevitrao fa ny lalàna ara-pivavahana, na farafaharatsiny ny soatoavina fototra, dia avy amin'ny zava-misy tsy miankina napetraka amin'Andriamanitra - toa ahy fa raha tokony hanavao ny lafiny hafa izay mamatotra an'Andriamanitra, ny fahasahiranana ara-teôlôjika aterak'izany, dia azo apetraka amin'ny hevitra hoe filàna lehibe amin'ny fanofanana olombelona. Mba hanamafisana ny fanofanana sy ny safidin'ny olona dia "Andriamanitra dia manana Torah sy mitzvos be dia be" ho azy ireo, na dia ireo izay mifanohitra amin'ny fitondran-tena aza. Tsaroako fa nanoratra tao amin'ny iray amin'ireo tsanganana ianao fa ny hamaroan'ny soatoavina no manome dikany bebe kokoa ny safidy, satria misy fitambarana azo atao kokoa eo amin'ireo soatoavina.
10 Adara 03, 2022 - 16/30/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Izay antsoiko hoe soatoavina ara-pivavahana dia antsoinao hoe fanofanana olombelona. Dia ahoana no maha samy hafa azy? Te hilaza ve ianao fa tsy misy tanjona mihitsy ao amin'ilay tanjona afa-tsy ny fahavitan'ilay lehilahy? Manaraka izany, ny lalàna rehetra dia tsy misy dikany (azony atao ny nisafidy lalàna hafa sy mifanohitra). Saingy miverina indray ny tohan-kevitr'i Tirgitz, maninona no misy tranga izay nametrahany azy ireo hanohitra ny fitondran-tena.
10 Adara 03, 2022 - 22/07/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Manoratra ianao fa ny soatoavina ara-pivavahana dia terena amin'ny Gd, na izany aza, raha misy fifandirana eo amin'ny soatoavina ara-pivavahana dia manao fahagagana izany ary manakana ny fahasimbana ara-pivavahana nateraky ny fanaovana ny lasa. Raha tsy azoko ny fomba fanerena ny soatoavina ara-pivavahana aminy - dia afaka manafoana azy ireo izy isaky ny tiany. Ary raha tsy te hitsabaka amin'ny zavaboary izy (eny fa na dia ny natiora ara-pivavahana aza), nahoana izy no mitsabaka amin'ny tranga misy fifandirana eo amin'ny soatoavina ara-pivavahana?
11 Adara 03, 2022 - 01/53/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Tsy terena hanao izany izy. Manery azy fa io no sandany. Na eo amin'ny moraly aza dia tsy voatery hanao izany izy fa izay ihany no famaritana ny tsara.
19 Adara 03, 2022 - 22/04/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
momba izay nosoratanao teto ”
"Na dia eo aza ny fiheverana bebe kokoa dia azo lazaina fa amin'ny teoria raha nanao zavatra aho dia navela ihany koa ny fahasimbana ara-panahy. Azo lazaina fa manao fahagagana sy misoroka ny fahasimbana i Gd mba tsy hisian'ny loza ho an'ny olo-marina toa ahy izay mahatoky amin'ny lalàna. ”
Raha izany no izy, nahoana no tsy hanao fahagagana foana izy mba hisorohana ny fahasimbana ara-panahy rehetra ataon’ny olona, ​​na manao zavatra azo atao izy na tsia?
20 Adara 03, 2022/19/24 amin'ny XNUMX:XNUMX
Satria manana tombontsoa izy fa miankina amin'ny ataontsika ny anjaran'izao tontolo izao. Tahaka ny manontany hoe maninona no manome safidy antsika fa tsy manao antsika hanao tsara foana tsy misy safidy (ary tsy mamorona antsika mihitsy).
20 Adara 03, 2022/19/41 amin'ny XNUMX:XNUMX
Tena hiankin-doha amin’ny ataontsika izao tontolo izao, ny fahasimbana ara-panahy ihany no tsy miankina amin’ny ataontsika, satria any araka ny nosoratanao no mirona hiditra an-tsehatra. Ary ankoatra izany, raha tian'Andriamanitra hiankina amin'ny ataontsika koa ny fahasimbana ara-panahy, nahoana raha misy olona nanao zavatra no avela hiditra an-tsehatra mba hisorohana ny fahasimbana ara-panahy? Rehefa dinihina tokoa, akanjo ho an'ny politikany ny hiankinan'izao tontolo izao amin'ny ataontsika.
20 Adara 03, 2022/23/28 amin'ny XNUMX:XNUMX
Miankina amin'ny ataontsika dia miankina amin'ny hoe nanao zavatra azo atao na voarara isika.
19 Adara 03, 2022 - 22/33/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Momba ny zavatra nosoratanao tamin'ity paragrafy ity:
“Hazavaiko ny fanontaniany. Araka ny fomba fijeriko dia mandidy antsika Andriamanitra mba hanana fitsipika manohitra ny fitondran-tena mba hampiroboroboana ny soatoavina ara-pivavahana. Raha izany no izy, hoy i Tirgitz, dia toa terena aminy ihany koa ny soatoavina ara-pivavahana fa tsy vokatry ny sitrapony (ny lalàna mifehy azy). Raha toa ka tsy “zava-misy halakika” nampiharina tamin’Andriamanitra ireo didy fa noforonina tamin’ny alalan’ny lalàny, dia azony natao tamin’ny fomba hafa izany. Amin'ny toe-javatra toy izany dia manantena aho fa raha te (sy nandova) hanao soa izy dia tsy hanao lalàna mifanohitra amin'ny fitondran-tena. Ny fisian'ny fifandirana dia manondro fa ny lalàn'ny halakhah (na soatoavina ara-pivavahana, izay mitovy amin'ny lalàn'ny halakhah) dia terena amin'Andriamanitra ihany koa, ka noho izany dia tratra izy (na mampijaly antsika) noho ny filana amin'ireo fifandirana ireo. "
Midika izany avy amin'ny teninao fa ny mitzvos sy ny lalàn'i Halacha rehetra dia voatery amin'ny Gd, fa avy amin'ny tohan-kevitrao dia tsy azo tsoahina afa-tsy amin'ny lalàna sy mitzvos izay mifanohitra amin'ny fitondran-tena. Ny didy toy ny fanononana Shema dia tsy manohitra ny fitondran-tena ary noho izany dia tsy ilaina ny manery an'i Gd na hoe zava-misy halakhic.
Ankoatra izany, dia azo atao ny misoroka ny tsy rariny ara-pitondrantena lehibe kokoa, na dia amin’ny toe-javatra misy aza Andriamanitra mandidy zavatra toa maloto fitondran-tena. Ohatra, ny momba ireo niharam-boina. Toa mandidy ny hamono biby tsy amin’antony Andriamanitra. Azo heverina anefa fa raha tsy nisy io didy io dia ho nanda tanteraka ny fivavahana ny olona satria tsy nisy singa lehibe teo amin’ny fiainana ara-pivavahana talohan’ny fanomezana ny Torah. Izany hoe, maranitra loatra ny fifindrana amin’ny fivavahana jiosy ka mety hahatandindomin-doza izany tetezamita izany.
Fanampin'izany, mety ho zava-dehibe kokoa noho ny fahasimbana ara-moraly amin'ny zavaboariny Andriamanitra indraindray (izay tsy terena aminy). Aoka horaisintsika, ohatra, ny fanirian’Andriamanitra hahazo valisoa. Raha noho izany tanjona izany izy indraindray dia tsy maintsy manisy ratsy olona iray avy amin’ny zavaboariny, dia mety ho vonona ny hanao izany izy mba hampiroboroboana izany faniriana izany, ary na dia mety hahafoy izany faniriana izany aza izy amin’ny fotoana iray, dia mbola ataony laharam-pahamehana ho toy ny zava-dehibe kokoa noho ny fahavoazana ara-moraly izany. . Izany hoe na ny didy mifanohitra amin'ny fitondran-tena aza dia tsy terena aminy ary tsy zava-misy halakhic, kanefa dia nisafidy ny handidy izany izy satria zava-dehibe aminy noho ny fahavoazana ara-moraly izany. Ary raha milaza ianao fa safidy ratsy fitondran-tena izany ary mifanohitra amin'ny fiheverana fa Andriamanitra dia moraly foana, dia hovaliako fa Andriamanitra koa dia tokony hanana fitondran-tena amin'ny tenany. Izany hoe rehefa mahafoy ny sitrapony izy dia misy ratra amin'ny tenany (karazana fiheverana ny fiainana teo alohanao).
20 Adara 03, 2022/19/27 amin'ny XNUMX:XNUMX
Eny tokoa, ny lalàna manohitra ny fitondran-tena ihany no resahina.
Raha ny momba ireo niharam-boina dia tsy azoko ilay fanontaniana. Manolotra fanazavana feno momba ny didin'ny sorona ianao. Okay. Ary raha fanazavana ara-moraly ankolaka no tianao lazaina dia tsy azo inoana izany raha ny hevitro.
Rehefa milaza ianao fa misy zavatra tsara kokoa eo imasony, dia midika izany fa manana tanjona tsy mitongilana izy, izay tsy vokatry ny sitrapon’Andriamanitra fotsiny.
20 Adara 03, 2022/19/47 amin'ny XNUMX:XNUMX
Raha ny amin’ny sorona kosa dia ny tiako holazaina dia misy didy izay toa manohitra ny fitondran-tenantsika, fa raha ny marina dia mampiroborobo ny fitondran-tena. Tsy azontsika fotsiny hoe ahoana na nahoana fa mety misy fanazavana lalina ao ambadik'ireny izay manampy amin'ny fampiroboroboana ny fitondran-tena (tsy ny didy manohitra ny fitondran-tena rehetra dia tsy maintsy izany, fa farafaharatsiny ny sasany amin'izy ireo).
Raha ny laharam-pahamehana eo imasony dia ny fanirian'Andriamanitra sy ny fanirian'Andriamanitra no tiako ambara. Izany hoe tsy zavatra terena avy any ivelany, fa ny sitrapony anaty. Tsy azoko antoka fa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny teny hoe arbitrary eto. Sahala amin'ny fanirian'ny olona iray ho mpilalao échec certifiée dia tsy atao hoe faniriana tsy misy dikany (tsy terena avy any ivelany). Faniriana manokana izany. Angamba Andriamanitra dia te-ho “mpilalao échec voamarina” amin'ny sehatra iray, ary noho izany dia vonona ny hanao sorona ny fahavoazana ara-moraly ho an'ny olona sasany izy indraindray.
20 Adara 03, 2022/23/31 amin'ny XNUMX:XNUMX
Sarotra amiko ny miresaka momba ny toetra sy ny fanirian’Andriamanitra.
21 Adara 03, 2022/00/19 amin'ny XNUMX:XNUMX
Tsy miresaka momba ireo olona voarahona mihitsy aho. Lazaiko fa mety misy ny sitrapon'Andriamanitra, fa na dia tsy terena aminy avy any ivelany aza izany (halakhic zava-misy), dia mbola zava-dehibe kokoa aminy noho ny fanimbana ara-moraly ny zavaboariny, ka noho izany izy no mandidy izany.
21 Adara 03, 2022/07/03 amin'ny XNUMX:XNUMX
Raha tsy terena aminy izany ary tsy misy tanjona hibaikoana izany dia fanapahan-keviny tsy misy dikany izany, ary ny draa kushya amin'ny duchy. Na tsy misy dikany izany na an-tery (amin'ny heviny hoe ny soatoavina ara-moraly no terena amintsika. Ny maha-ara-dalàna azy no terena fa tsy ny fitondran-tena araka ny tokony ho izy). Tsy hitako izay mety fanintelony.
21 Adara 03, 2022/11/28 amin'ny XNUMX:XNUMX
Ny olona te ho mpilalao échec certifié ve no faniriany tsy misy dikany? Sa terena aminy?
21 Adara 03, 2022/12/39 amin'ny XNUMX:XNUMX
Sitrapo tsy miangatra fotsiny. Raha efa raiki-tampisaka izany dia terena aminy.
21 Adara 03, 2022/14/56 amin'ny XNUMX:XNUMX
Misy ny zava-miafina ny asa filàna ambony sy ny fanirian'Andriamanitra handoa vola. Amin’izy roa ireo dia mila antsika Andriamanitra mba hanatratrarana ireo tanjona ireo. Mba hahatratrarana ireo tanjona ireo dia tsy azo ihodivirana ny hisian'ny fahavoazana ara-moraly. Tsy misy hafa amin’ny fanaovan’ny olombelona fanandramana biby ho an’ny fitsaboana, dia azo inoana fa Andriamanitra no mampiasa antsika, na dia manimba antsika aza izany indraindray, noho ny filany.
21 Adara 03, 2022/14/59 amin'ny XNUMX:XNUMX
AHN. Ka terena aminy izany. Ny hoe mahazo valisoa dia midika hoe tonga lafatra kokoa, ary tsy eo an-tanany ny famaritana ny fahatanterahana.
21 Adara 03, 2022/15/41 amin'ny XNUMX:XNUMX
Nahoana no tsy maintsy ho terena aminy izany. Mety hifidy izany izy. Rehefa dinihina tokoa, ny ilana rehetra ny filazana fa terena aminy dia avy amin'ny fanazavana fa Andriamanitra dia tsy hifidy zavatra maloto fitondran-tena. Fa nomeko ohatra fa rehefa ilaina dia ny olombelona ihany koa no misafidy zavatra maloto ho an'ny tenany ary marina izany (experiment médicale amin'ny biby)
21 Adara 03, 2022 - 17/02/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Fanerena ny olombelona no manao izany. Manery azy ireo ny aretina ary toy izany koa ny fomba fanasitranana.
21 Adara 03, 2022 - 17/46/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Afaka manao andrana amin'ny olona izy ireo na mahafoy ny fanafody. Izany hoe, tsy misy ilana sanda na zava-misy manan-danja izay manery hanao andrana amin'ny bibidia.
21 Adara 03, 2022 - 18/51/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Misy ny zava-misy fa ilaina ny fanandramana mba hianarana, ary misy ny zava-misy ara-moraly fa ny Sabata dia ambony noho ny olombelona.
21 Adara 03, 2022 - 19/43/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Koa nahoana no tokony ho tonga amin'ny zava-misy halakhic izay manery an'i Gd. Azo lazaina fa misy zava-misy ara-moraly izay milaza fa raha tokony ho fifanoherana eo amin'ny filan'Andriamanitra sy ny fanimbana ara-moraly ny olombelona, ​​dia misy ny zava-misy ara-moraly milaza fa tsara kokoa ny manimba ny olombelona toy izay mampandefitra ny filan'Andriamanitra.
21 Adara 03, 2022 - 19/48/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Manery azy koa ny filan’Andriamanitra, na tsy ilaina izany ary tsy manamarina ny fandavana ny soatoavina ara-pitondrantena.
Raha ny hevitro dia tsy misy hivoahana amin'izany: na an-tery na tsy misy dikany. Ary tsy mandà ny fitondran-tena ny tsy rariny. Isaky ny avy amin'ny lalana samihafa ianao fa ny valiny dia mitovy. Fohy ny bodofotsy, afaka manarona ny tongotra na ny loha ianao fa tsy izy roa.
21 Adara 03, 2022 - 20/13/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Okay, fa tsy zava-misy halakhic ny filana. Raha ny fahazoako anao dia ny halakhic na ny zava-misy ara-moraly dia zava-misy eo amin'ny sehatry ny ought fa tsy ny is.
21 Adara 03, 2022 - 20/54/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Tsy maninona izany. Mbola misy zavatra terena aminy. Saingy ankoatra an'izany, io filàna io dia zava-misy izay miteraka TOKONY. Ny hevitra dia ny hoe ny lalàna dia terena aminy toy ny soatoavina ara-moraly. Toa tsy zava-dehibe amiko izany na fanerena amin'ny alalan'ny zava-misy sy filàna izany na mivantana. Mbola mihevitra aho fa soatoavina ireo, fa nahoana no zava-dehibe izany?!
21 Adara 03, 2022 - 21/07/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Io no nametrahako hevitra tamin'ny valinteny teo aloha. Ny zava-misy amin'ity filana ity dia mamorona tokony, fa tokony avy amin'ny sehatry ny fitondran-tena fa tsy avy amin'ny halakhic na hafa. Toy ny andrana amin'ny biby fa tsy amin'ny olombelona no tokony ho ara-moraly ary tsy nandeha aho.
21 Adara 03, 2022 - 21/12/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Tsy voatery hoe morality. Misy mila na sarobidy, ara-moraly na tsia. Ohatra, ny fampiofanan’Andriamanitra dia tsy filana ara-pitondrantena amin’ny heviny mahazatra. Na ny fandrarana ny fihinanana henan-kisoa aza dia toa tsy fanehoana ny zava-misy ara-moraly.
21 Adara 03, 2022 - 21/19/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Ny tiako holazaina dia Andriamanitra mandidy ny didy manohitra ny fitondran-tena noho ny filana izay misy ao Aminy. Saingy alohan'ny handidy azy dia ao anatin'ny dilemma izy na hanao laharam-pahamehana ny filany, na hisorohana ny fahavoazana ara-moraly amin'ny olombelona. Io olana io dia mipetraka eo amin'ny sehatry ny moraly. Tahaka ny olana amin'ny fanaovana andrana amin'ny olombelona na amin'ny biby eo amin'ny sehatry ny moraly.
21 Adara 03, 2022 - 21/32/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Noho izany dia misy soatoavina ara-pivavahana (izay fidinao hiantsoana hoe ilaina) no terena amin'izany, ary ny fanapahan-kevitra ao amin'ny dilemma eo aminy sy ny moraly ihany no fanapahan-kevitra momba ny etika. Eritrereto hoe marina ianao, dia ahoana? Aiza ny hevitra? Ankoatra izany, raha ny hevitro, ny fanapahan-kevitra eo amin'ny soatoavina ara-pivavahana na ny filana sy ny soatoavina ara-moraly dia tsy eo amin'ny ambaratongam-pitondrantena.
22 Adara 03, 2022 - 10/57/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Raha ny fahalalako azy dia nilaza izao i Rabbi Michi:
A. Irin’Andriamanitra ny tsara satria tsara Izy
B. Ny lamina ara-pivavahana dia tsy mitovy amin'ny lamina ara-moraly
fahatelo. Amin'ny fifanoherana eo amin'ny lamina ara-pivavahana sy ny lamina ara-moraly, dia tsy maintsy voafidy indraindray ny lamina ara-moraly
Nahoana raha milaza fa sary an-tsaina fotsiny ny fifandonana (tahaka ny fanatonan'ny Raby Lichtenstein sy manohana ny toe-tsaina manjaka ao amin'ny distrika ara-pivavahana)?
D. Ny fahazoako azy dia tsy maintsy manaraka izany fa ny ordre relijiozy dia terena amin'Andriamanitra koa, raha tsy izany nahoana izy no mandidy mifanohitra amin'ny fitondran-tena?
Ny tokony ho takatra dia hoe nahoana isika no avela hifidy ny lamina ara-moraly raha misy ady, satria Andriamanitra no nifidy ny lamina ara-pivavahana tamin’io ady io?
Ny vahaolana azo atao dia ny hoe nomen'Andriamanitra ny lamina ara-pivavahana, saingy nitsahatra tamin'ny fiambenany izy, ary heverintsika fa amin'ny zava-misy nomena azy dia tsy mitzvah izy, ka noho izany dia misafidy ny lamina ara-moraly.
Izany rehetra izany araka ny fomba amam-panaon'ny zanakay, Ramad Shlita, dia mahatoky amin'ny fombany izay tsy manaiky ny safidin'ny sitrapon'Andriamanitra (ary mahita ny siansa momba ny fahafahana). Ary doc sy il.
22 Adara 03, 2022 - 14/06/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Raha mamaky ny tenin'ny manam-pahaizana amin'ny herinao ianao dia ho hitanao fa manoratra aho fa tsy azo atao, satria izy mihitsy no efa nifidy. Noho izany dia tsy ilaina ny mitady vahaolana.
23 Adara 03, 2022 - 14/16/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Midika izany fa tsy misy maha-izy azy ny halakhah sy ny fitondran-tena  Ireo dia sokajy roa izay mahaleo tena amin'ny foto-kevitra (na dia tsy misy fifanoherana foana aza izany mazava ho azy). Ny fitsarana na ara-moraly na tsia ny fihetsika iray, ary ny fitsarana na azo atao na voarara amin'ny fomba halakh dia fitsarana roa samy hafa ary saika mahaleo tena. Ny sokajy halakhic sy moraly dia sokajy roa samy hafa. Mazava ho azy fa amin'ny tranga misy fifanoherana eo amin'ny fampianarana ara-moraly sy halakhic dia tsy maintsy manapa-kevitra amin'ny fomba sasany (ary tsy mankasitraka ny halakhah foana izany), fa ny fisian'ny fifandirana dia tsy olana ho azy. Misy ihany koa ny fifandirana eo amin'ny soatoavina ara-moraly roa (toy ny amin'ny famonjena aina amin'ny fanaintainan'ny fanaintainana), ary tsy azo lavina fa hisy ihany koa ny hasarobidin'ny halakhic sy ny soatoavina ara-moraly.
Teny avy amin'ny tsanganana 15. sy ny fanamarihanao momba ny pelaka tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i London. Moa ve tsy mpampianatra izay tsy mitandrina ny lamina ara-pivavahana indraindray? Azonao hazavaina amiko ve ny fahasamihafana?
23 Adara 03, 2022 - 14/43/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Niatrika izany aho tamin'ny fiandohan'ny boky fahatelo amin'ny trilogy. Raha fintinina, rehefa misy fifandirana lehibe dia manjaka foana ny lalàna. Ohatra, avy amin’ny Amalekita. Ny Torah mihitsy no nihevitra ny vidiny ara-moraly nefa nandidy izany. Saingy rehefa tsy nahy ny fifandirana, toy ny fifehezana ny saina sy ny Sabata, dia tsy azo esorina amin'ny didy momba ny Sabata mihitsy ny mandà ny Pikun na ny mifamadika amin'izany. Amin'ny toe-javatra toy izany dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ho an'ny tenanao ianao.
Ary izany rehetra izany rehefa mazava ny didy ao amin'ny Torah. Raha vokatry ny fandikana na toriteny izany dia miditra eto ny fisalasalana fa tsy mety io fitsipika io.
23 Adara 03, 2022 - 14/27/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Efa niresaka momba ny fironana mifanohitra amin'ny Jodaisma aho taloha, fa ny hevitrao dia amin'ity tranga ity dia tokony hofidiana amin'ny Torah ny moraly, mifanohitra amin'ny Raby Riskin izay manao okimata ao amin'ny Torah, sy ny raby nentim-paharazana izay manao okimata amin'ny fitondran-tena. Ary ny fomban'ny Isiraely Torah.
Soa ihany fa tena faly aminao aho manazava ny hevitro. Raha ny halakhah Daurite mibaribary izay mifanohitra amin'ny fitondran-tena, misy toerana hisafidianana ny fitondran-tena ve? Ary ahoana ny momba an'i Halacha Durban? Moa ve Okimata natao ho Dauriyta halakhah amin'ny fomba tsy mifanohitra amin'ny fitondran-tena, na dia mifanohitra amin'ny fomban-drazana halakhic aza?
23 Adara 03, 2022 - 14/44/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Nanazava aho. Raha ny momba an'i Okimot mazava ho azy fa azo atao izany. Tsy voahidy ny vavahadin’ny fandikana.
27 Adara 03, 2022 - 14/54/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Fanontaniana tsy manan-tsiny. Ny fisian'ny morality manan-kery (Andriamanitra, ohatra) - aiza no misoratra anarana io moralité io? Moa ve isika mihevitra fa tsy azo atao ny mamono olona sy mangalatra? Izany hoe, raha zavatra ianarana avy amin'ny intuition olombelona na avy amin'ny convention ara-tsosialy nentim-paharazana, dia tsy an'ny fanerena olona tsy nanaiky izany intuition izany intsony. Ary raha misy ifandraisany amin'ny Torah izany, dia lalànan'Andriamanitra voasoratra indray izy io, ary aiza ny fanavahana ny Torah sy ny fitondran-tena?
27 Adara 03, 2022 - 15/30/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Voasoratra eo amin’ny takelaka misy ny fontsika izany. Mampianatra anay ny Torah ary nanao ny tsara sy ny tsara ianareo, nefa tsy milaza aminay izay tiana holazaina. Mihevitra izy fa ny olon-drehetra dia mahafantatra ny dikan'ny lamina ara-moraly (voasoratra eo amin'ny takelaka misy ny fony). Ny votoatin'ny fitondran-tena dia ianarana avy amin'ny intuition ara-moraly, fa ny adidy hanaraka izany dia noho ny sitrapon'Andriamanitra. Araka ny nohazavaiko tao amin'ny tsanganana. Raha misy olona tsy manana an'io intuition io dia olona marary ary tsy misy ifandraisany amin'izany. Toy ny hoe tsy misy ifandraisany amin'ny jamba tsy mahita.
Ny maha samy hafa ny halakhah sy ny fitondran-tena dia ao amin'ny didy. Ny didy ao amin'ny Torah dia mifandraika amin'i Halacha ihany, ary ny fitondran-tena dia tsy eo ambanin'ny didy. Sitrapon’Andriamanitra tsy misy didy izany ka noho izany dia mijanona ivelan’ny lalàna. Noho izany koa ny votoatiny dia tsy hita ao amin'ny Torah fa ao anatintsika. Etsy ankilany, ao amin'ny Halacha dia voasoratra ao amin'ny Torah koa ny ao anatiny. Noho izany, "ary nanao izay tsara sy tsara ianao" dia tsy tafiditra tao amin'ny numerator ny mitzvos amin'ny vahoaka rehetra.
27 Adara 03, 2022 - 15/37/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Izany hoe misy ny fiheverana fa ny "fahamarinana sy ny fahatsarana" dia zavatra takatry ny olombelona tsirairay ao anatin'ny foto-pisainany fototra, izany hoe ny zavatra ekentsika ho vonoan'olona sy fanolanana, fa ilay fanontaniana napetrako tsy mino an'Andriamanitra - inona no holazainao. mpikarama an'ady izay mihevitra fa famonoana olona ny fomba fiasany. Porofo fa misy rafitra ara-moraly ivelany ho an'ny olombelona, ​​avy amin'Andriamanitra, nefa indray, ity rafitra ity dia tsy mandika izay tafiditra ao amin'ny "fahamarinana sy ny hatsarany", ary hanontany anao indray izahay hoe inona no holazainao momba ny mpikarama an'ady izay mino fa ny famonoana dia fahamarinana sy fahatsarana. Raha fintinina, tiako ny hanatsara ny olana atrehinao amin'ny fiheverana fa mila an'Andriamanitra ny fitondran-tena.
27 Adara 03, 2022 - 16/19/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Mampifangaro fiaramanidina ianao. Nametraka fanontaniana aho fa tsy momba ny olona tsy mahatakatra fa voarara ny famonoana olona fa olona izay mahatakatra fa voarara izany nefa tsy mahatsapa fanoloran-tena amin'izany. Fanontaniana hafa tanteraka izany. Jamba izay tsy mahalala. Inona no tokony holazaiko aminy? Izany hoe ho an'ny jamba tsy mahita ny zava-misy ary mandà ny fisian'ny loko ohatra.
Ny nanontaniako azy ireo dia hoe inona no loharanon'ny fahamendrehan'ny fitondran-tena ho azy ireo fa tsy izay lazain'ny lalàn'ny fitondran-tena.
Raha tsy misy an'Andriamanitra, dia tsy ho voafatotry ny fitondran-tena koa aho, noho ny fahatsapako ny maha-marina ny lalàn'ny fitondran-tena. Hesorinao io fahatsapana io ho toy ny hevi-diso izay takatro ato anatiko fa tsy tena manan-kery izany. Andriamanitra irery ihany no afaka manome izany.
27 Adara 03, 2022 - 16/25/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Tsapako. Amin'ny ankapobeny dia lazainao fa izay tafiditra ao anatin'ny moraly - dia fantatry ny olombelona rehetra, efa raiki-tampisaka ao amintsika ny hoe maloto fitondran-tena ny famonoana olona sy ny fanolanana. Ary amin'ny ankapobeny dia miady hevitra ihany koa ianao fa io fitondran-tena fototra io dia tsy maintsy eken'ny rehetra, na dia eo aza ny fiovan'ny kolontsaina sy ny vanim-potoana. Ny maha samy hafa ny tsy mino an'Andriamanitra sy ny mpino dia ny mpino ihany koa no manazava ny antony mahatonga izany fitondran-tena izany manery azy. azoko tsara?
27 Adara 03, 2022 - 16/26/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
tena toy izany. Heveriko fa nazavaiko tao amin'ny tsanganana izany na tamin'ny adihevitra tany am-boalohany.
27 Adara 03, 2022 - 16/33/XNUMX amin'ny XNUMX:XNUMX
Ny bibyny On Miaraka amin'ny fahafatesan'ny Prof. David Halvani Weiss (tsanganana 485)
Jonatana Shalom tao Nakiona On Miaraka amin'ny fahafatesan'ny Prof. David Halvani Weiss (tsanganana 485)
Yshai On Valiny fanontaniana momba ny fianarana